19/05/13 - 26/05/13 (73)
သက်တမ်းကုန်ရက် တစ်နှစ်လိုသည့် ဆေးဝါးများဖြစ်သော်လည်း ဆေးအရည်အသွေး ပြောင်းနေမှုကိုတွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးများကို ကိုယ်စားလှယ် ယူထားသူက အဆမတန် ဈေးတင်ရောင်းချသည်ဟု ဆိုကာ ဆေးဝါးကုန်သည်များက သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားကြောင်း ဆေးဝါး ကုန်သည်များထံမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အမှတ်(၁)နှင့်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန များသို့ မင်္ဂလာဈေးမှ ဆေးဝါးကုန်သည်များက အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာတွင် ဆေးဝါးများ ဈေးနှုန်းအဆမတန် မြင့်တက်နေခြင်း၊ အမှန်တကယ် စားသုံးသူ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဆေးဝါးများကို ဈေးနှုန်းနှစ်ဆကျော်ဖြင့် ၀ယ်ယူသုံးစွဲနေရခြင်း၊ ထိုသို့ ဈေးနှုန်းမြင့် တက်နေခြင်းကို လျှော့ချပေးရေး၊ဆေး ၀ါးများအား တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းမျိုး မပြုဘဲ ဆေးကုန်သည်များထံ ညီတူညီမျှခွဲ ဝေရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုထံသို့ တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ပေးရန်တို့ကို တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆေးဝါး လုပ်ငန်းစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးဝါးအချို့ကို လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုသို့ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ရောင်းချခွင့်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှဆေးဝါးများ ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် မူရင်းဈေးနှုန်းထက် နှစ်ဆဈေးဖြင့် ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း ဆေးဝါးကုန်သည်များ ထံမှသိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့က MPF ဆေး ၀ါးတွေကို အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတာကြာပါပြီ။ MPF ဆေးဝါးတွေ ရဲ့ ဈေးနှုန်းက မူရင်းဈေးနှုန်းထက် နှစ်ဆကျော် ပေးဝယ်နေရတယ်။ ဥပမာ Provimin 500mg 100's ပါ ဘူးတစ်ဘူးကို ဌာနကနေ ကိုယ်စားလှယ် ကို ရောင်းချပေးတဲ့ ဈေးနှုန်းက ၆၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းတယ်။ အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီက ကျွန်တော်တို့လို ကုန်သည်တွေဆီကို ပြန်ရောင်းတဲ့ ဈေးက ကျပ် ၁၂၀၀ နဲ့ ပြန်ရောင်းတော့ တကယ်သုံးစွဲတဲ့ ပြည်သူတွေ ၀ယ်ရတဲ့ဈေးနှုန်းက ၁၂၀၀အထက် မှာရှိနေပါတယ်”ဟု မင်္ဂလာဈေးရှိ ဆေးဝါးကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဈေးကွက်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် ဆေးဝါးအချို့မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် နီးကပ်နေသည့် ဆေးဝါးများ ဖြစ်နေကြောင်းနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် တစ်နှစ်နီးပါး ခန့်လိုသော်လည်း ဆေးဝါးများ၏ အရည်အသွေးမှာ ကျဆင်းနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရကြောင်း ဆေးအရောင်းဆိုင်များမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါး လုပ်ငန်းစက်ရုံမှ ဆေးအမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပြီး ဆေးဝါးအများစုမှာ လူသိများသော ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
8/25/2011 09:50:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် Quintana ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ)
8/25/2011 09:46:00 PM
ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက်သဖြင့် ဆန်တင်ပို့မှုပြန်စ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ (Export Earning) စသည့် ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းများ ကျဆင်းနေရာမှ ပြန်လည်မြင့်တက်လာ သည့်အတွက် ဧည့်မထဆန်ဈေးလည်း
မြင့်တက်ကာ ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှု ပြန်လည် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းတွင် သင်္ဘောပေါ် ဆန်သယ်ပို့နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
အမေရိကန် တဒေါ်လာဈေး ၆၄၈ ကျပ်အထိ ကျဆင်းနေရာမှ ယနေ့ ၇၅၅ ကျပ်အထိ မြင့်တက်သွားပြီး ပို့ကုန်ဝင်ငွေ (Export Earning) မှာလည်း ၇၁၇ ကျပ်မှ ၇၇၀ ကျပ်ဈေး အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ပို့ကုန်ဝင်ငွေသည် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း လိုအပ်သည့် တရားဝင် ငွေကြေးဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိရာ ယမန်နေ့မှ စတင်၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး အနည်းငယ် မြင့်တက်လာသည့်အတွက် ပို့ကုန်ဝင်ငွေလည်း မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့စဉ်ကတည်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ဆက်တိုက် ကျဆင်းခဲ့ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး တရှိန်ထိုး
တက်သွားခဲ့သည်။ထိုသို့ ကျဆင်းသွားသည့်အတွက် ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများက အကျိုးအကြေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါ ဧည့်မထဆန် တတင်းခွဲ တအိတ်လျှင် ၁၃၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့ရာမှ ၁၂၇၀၀ ကျပ်ဈေးသို့ လျှော့ချဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် ဆန်ဈေးကွက်တွင် ဧည့်မထဆန် ရောင်းဝယ်မှု ၂ ရက်ကြာ ရပ်ဆိုင်းသွားသည်။ယနေ့တွင်မူ အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး ပြန်လည် မြင့်တက်လာခြင်း၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆန်တင်ရန် သင်္ဘောများ ရောက်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဆန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများက ဈေးနှုန်းကို မြှင့်တင်ပြီး ၀ယ်ယူကြောင်း ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံတန်းမှ ဆန်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။“ကုမ္ပဏီတွေ ဈေးချဝယ်ပေမယ့် နယ်မှာ ဆန်ကရှားနေတယ်။ အဲဒီတော့ လူတွေကလည်း ဈေးမကိုက်တော့ မရောင်းဘူး။ အခုငွေဈေး ပြန်တက်တာရယ်၊ သင်္ဘောတင်ဖို့ အရေးကြီး နေတာရယ်ကြောင့် ပြန်ဝယ်နေပြီ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ယနေ့ ဧည်မထ ဆန်ဈေးနှုန်းမှာ ၁၃၂၀၀ ကျပ် မှ ၁၃၈၀၀ ကျပ်အထိ မြင့်တက်သွားကြောင်း၊ ပြည်တွင်းစားသုံးသည့် ဆန်များမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ယခုအခါ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆန်တင်မည့် နိုင်ငံခြားသင်္ဘော ၇ စီး ဆိုက်ကပ်ထားပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကိုအော်ပရေးရှင်းနှင့် ယခင် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးအောင်သန်းဦး ပိုင်ဆိုင်သည့် ပင်လယ်ကိုးသွယ် ကုမ္ပဏီ၊ ရတနာကျော်၊ ဒိုင်းမွန်းစတား၊ ရတနာဝင်း၊ ကဉ္စနကျွန်းသာ ကုမ္ပဏီတို့က ဆန်တင်ခွင့် ရရှိထားသည်ဟု သိရသည်။ထိုသို့ ငွေကြေးဈေးကွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်နေမှုကြောင့် ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အရှုံးပေါ်နေခြင်းကို ကာမိစေရန် အစိုးရကပြီးခဲ့သည့်
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဆန်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ရော်ဘာ၊ ရေချိုရေငန်ထွက် ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန် ထွက် ပစ္စည်းများ ပြည်ပ
တင်ပို့မှုအပေါ် ၆ လ ကုန်သွယ်ခွန် စည်းကြပ်ခြင်း မပြုတော့ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်တခုဖြစ်သည့် နှမ်းမှာ ပြည်ပ ၀ယ်လက်ဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အလုံးအရင်း ၀ယ်ယူမှုမရှိခြင်း၊ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဘိုးမြင့်တက်နေခြင်း တို့ကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်း နေကြောင်း သိရသည်။ယနေ့
နှမ်းပေါက်ဈေးမှာ ဆီကြိတ်နှမ်း ၃ တင်း တအိတ် (ပိဿာ ၆၀) သည် ၅၃၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖြင့် အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်နေကြောင်း၊ နှမ်းဆီမှာ ၂၃၀၀ ကျပ်၊ စားအုန်းဆီမှာ
တပိဿာ ၁၇၅၀ ကျပ်၊ ပဲဆီမှာ ၃၁၀၀ ကျပ် ဈေး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
8/25/2011 09:39:00 PM
အဖွဲ့​ချုပ်ရပ်တည်​ရေး​ကိစ္စ ကုလသမဂ္ဂ ဥပ​ဒေပညာရှင် ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်မည်
အစိုး​ရက ကြေညာထား​တဲ့​အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေအဖွဲ့​ချုပ် ပါတီ တရား​ဝင်ရပ်တည်​ရေး​ကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ကုလသမဂ္ဂမှ ဥပ​ဒေကျွမ်း​ကျင်သူ ပညာ
ရှင်တဦး​လာ​ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့​ဆောင်ရွက်​ပေး​မယ်လို့​ကုလသမဂ္ဂ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​အထူး​စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​သူက ပြောကြား​သွား​ပါတယ်။
အဖွဲ့​ချုပ် ဥပ​ဒေအ​ထောက်အကူပြုအဖွဲ့​ဝင်​တွေက ကုလသမဂ္ဂ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​အထူး​စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​သူ မစ္စတာကင်တား​နား​ကို ဒီ​နေ့​တွေ့​ဆုံရာမှာ ပါတီတရား​ဝင်ရပ် တည်မှုနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​တင်ပြပါတယ်။
ကင်တား​နား​က သူဟာ ဥပ​ဒေကျွမ်း​ကျင်သူ ပညာရှင် မဟုတ်​ကြောင်း​၊​ဒါ​ကြောင့်​ကျွမ်း​ကျင်သူ ပညာရှင်တဦး​မြန်မာပြည်ကို မကြာမီ လာ​ရောက်​တွေ့​ဆုံနိုင်​အောင် ဆောင်ရွက်​ပေး​မယ်လို့​ကတိပြုသွား​တယ်လို့​အဖွဲ့​ချုပ် ဥပ​ဒေအ​ထောက်အကူပြုအဖွဲ့​ဝင် ရှေ့​နေ ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​က ပြောပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်​နှစ် ပါတီစုံ အ​ထွေ​ထွေ​ရွေး​ကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အဖွဲ့​ချုပ်ကို ပါတီရပ်တည် မှု ပျက်ပြယ်ပြီလို့​လက်ရှိအစိုး​ရက ကြေညာထား​တာပါ။
ဥပ​ဒေအ​ထောက်အကူပြုအဖွဲ့​က မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်​ပေါ်​နေတဲ့​လူအခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်ခံရမှုအ​ခြေအ​နေ​တွေကိုလည်း​ကင်နား​နဲ့​အဖွဲ့​ကို ပြောကြား​လိုက်တယ်လို့​လည်း​ပြောပါတယ်။
တွေ တရား​မဲ့​ဥပ​ဒေနဲ့​မညီဘဲ လယ်ယာ​တွေ အသိမ်း​ခံရလို့​သူ တို့​ရဲ့​အခွင့်​အ​ရေး​တွေ ဆုံး​ရှုံး​တာ၊​ပ​ရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆရာဝန်​တွေ၊​ရှေ့​နေ​တွေ သူတို့​ရဲ့​လိုင်စင်​တွေ ရုပ်သိမ်း​ခံရတာ ဒီအ​ခြေအ​နေမျိုး​တွေကို​တော့​ကျ​နော်တို့​ပြောလိုက်ပါ တယ်။”
8/25/2011 01:17:00 PM
8/25/2011 01:09:00 PM
ကျလွန်းထော – မြန်မာကျပ်ငွေဈေးမြင့်တက်နေသည့် သြဂုတ်လ
ကာလအတွင်း နယ်စပ်ဘုရားသုံးဆူရှိ ကုန်သည်ပွဲစား ထက်ဝက်နီးပါး ကုန်သွယ်မှု ရပ်နားထားကြသည်ဟု ဘုရားသုံးဆူဒေသခံ ကုန်သည်များက ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့သို့ ကုန်ခြောက်များ တင်သွင်းနေသည့်ကုန်သည်များက ငွေလဲလှုယ်မှုမကိုက်ခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးမြှင့်တင်ရောင်းချရသည့်အတွက် ကုန်သွယ်မှုမှ ခေတ္တရပ်နားထားရသည်ဟု ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ ဆန်ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဒီဘုရားသုံးဆူမှာ ကုန်သည်ထက်ဝက်လောက်က အလုပ်နားနေကြရတယ်၊ ကျမတို့လို ကိုယ့်ပိုက်ဆံ စိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲ ကုန်ကူးနေကြတာ၊ ရောင်အားမရှိသလို ဝယ်တဲ့သူတောင် သိပ်မရှိတော့ဘူး။ တချို့ ကုန်ခြောက်သွင်းနေတဲ့ ကုန်သည်တွေ နားပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲ လုပ်စားနေကြပြီး” ဟု အဆိုပါဆန်ကုန်သည်က ပြောသည်။
သြဂုတ်လ လဆန်းပိုင်းမှစ၍ မြန်မာငွေဈေး မြင့်တက်လာပြီး မြန်မာပြည်မှလာသည့်ဆန်ကောင်း တစ်အိတ် ၁၀၀၀ ဘတ်ရောင်းနေရာမှ ၁၂၀၀ ဘတ်အထိ တိုးပြီးရောင်းနေရကြောင်း ၄င်းကုန်သည်က ဆက်ပြောသည်။
ဇူလိုင်လအတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ သိန်းလျှင် ၃၈၀၀ ဘတ်ဖြင့် လဲလှုယ်ရာမှ သြဂုတ်လအတွင်းနေ့စဉ် လျော့ကျလာသည်မှာ ယနေ့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ သိန်းကို ၄၆၀၀ ဘတ်ဖြင့် လဲလှုယ်နေရသည်ဟု မဟာချိုင်မြို့မှ ငွေလွှဲနေသူ ကိုနိုင်က ပြေသည်။
“ဒီသြဂုတ်လကစပြီးတော့ ဈေးကျနေတာ တစ်နေ့ကို ဘတ် ဒသမ ၁၀ ကျနေတာ၊ ဆက်ကျဖို့ ရှိသေးတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ သို့သော် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်တွင်မူ ယနေ့ငွေလဲနှုန်းအရ မြန်မာငွေကျပ်တစ်သိန်းရရန် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၄၅၄၅ ဘတ်ပေးဆောင်နေရသည်။
အလားတူ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင်လည်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ မရပ်ဆိုင်းသေးသော်လည်း ၄င်းတို့တင်ပို့ကုန်များကို ဈေးနှုန်းများမြှင့်တင်ကာ ရောင်းချနေရသည်ဟု ကုန်ခြောက်များတင်သွင်းနေသည့် ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“မြန်မာဖက်ကလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ အရင်ကဘတ် ၇၀၀ တန်ကို အခု ၁၀၀၀ ဘတ်နဲ့ရောင်းနေရတယ်၊ ဘတ်ဈေးက ထပ်ကျဖို့ရှိသေးတယ်လို့ပြောနေကြတယ်” ဟု ဆန်ကုန်သည်က ပြောသည်။
တစ်လလျှင် လုပ်အားခ ၄၀၀၀ ဘတ်ရရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိဘထံ ငွေကြေးမပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့် ငွေလဲနှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းလာပါက နေရပ်ထံ ပြန်မည်ဟု ဘန်ကောက်မြို့မှ မြန်မာအလုပ်သမ မိနီက ပြောသည်။
“ပြည်တွင်းမှာရတဲ့လုပ်အားခက အခုဒီမှာရတဲ့လုပ်အားခနဲ့ တူသလောက်ဖြစ်နေပြီး၊ ဒီအတိုင်းတာ ဘတ်ငွေဆက်ကျနေမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းကိုပြန်တော့မယ်” ဟု မိနီက ပြောသည်။
လက်ရှိပြည်တွင်းရွှေဈေးမှာ အခေါက်သားတစ်ကျပ်သား ကျပ် ၇ သိန်းအထက်တွင်ရှိနေပြီး ထိုင်းရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားမှာ ၂၇၀၀၀ ဘတ်ကျော်သွားပြီဟု သတင်းများတွင်ဖေါ်ပြနေသည်။
ယမန်နေ့ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်ရာတွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေ ၆၈၅ ကျပ် (ဝါ) ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၉.၈၃ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မြန်မာငွေကျပ် ၁ သိန်းရရန် ဘတ်ငွေ ၃၀၀၀ ဖြင့်လဲလှုယ်ခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်း ၄၂၀၀ ဘတ်အထိ ငွေလဲလှုယ်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ရာ ယခုအခါ ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးနှုန်း အနိမ့်ဆုံးသို့ကျဆင်းသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
8/25/2011 12:40:00 PM
လျှပ်စစ်ရုံးမှ ၀န်ထမ်းများ မီတာခကို ခန့်မှန်း၍ တောင်းနေကြ
တာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းများ လစဉ်ပုံမှန် မီတာ အတက်အကျ မဖတ်ဘဲ မီတာခနှုန်းထားများကို မိမိစိတ်ကြိုက် ခန့်မှန်း၍ မသိနားမလည်သော ဒေသခံလူထုများ၏ အိမ်တချို့ကို မီတာခ တောင်းနေကြသည်ဟု လွိုင်ကော်မြို့ ဌာနဆိုင်ရာတခုမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“အရင်နှစ်တုန်းကတော့ ရေတင်စက်နဲ့ ရေခဲသေတ္တာ အဲဒါတွေ သုံးခဲ့တော့ မီတာ တက်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီနှစ်မှာ အဲဒါတွေ မသုံးတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မီတာက အရင်နှစ်ကလိုပဲ ကောက်နေတယ်။ မီတာကို ဖတ်ကြည့်တော့လည်း အများကြီး ကွာနေတယ်” ဟု ပြောသည်။ အချို့အိမ်များတွင်လည်း မီတာပေါက်များ ရှိနေသော်လည်း မီတာ မဖတ်တော့ဘဲ အိမ်တွင် လျှပ်စစ်မီးဖြင့် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို စာရင်း ကောက်ပြီး အသုံးပြုမှု တခုချင်းစီ အပေါ်တွင် မီတာခဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ကရင်နီပြည်တွင်းတွင် မီးတိုင်များကို ခြံဖြင့် ဤသို့ ကားရံထားသည်။ (ဓါတ်ပုံ-ကေအက်စ်ဒဗလျူဒီစီ)
ထိုသို့ စာရင်း ကောက်ယူထားပြီး မီတာခ ပေးဆောင်နေကြရသည့် လွိုင်ကော်မြို့မှ ရပ်ကွက် တခုရှိ အသက် ၆၀ ကျော် ဒေသခံ အဖိုးတဦးက “မီတာဘောက် ရှိနေရဲ့သားနဲ့ မီတာ လာမဖတ်ဘဲ အဲလိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး လိုက်ကောက်တာ ပိုပြီးတော့ အကုန်အကျ ပိုများပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မီးသီး တလုံး အသုံးပြုလျှင် သုံးရာကျပ်၊
လျှပ်စစ်ထမင်းအိုး တလုံးလျှင် ငါးရာကျပ်ဖြင့် ကောက်ခံပြီး၊ ထိုသို့ ကောက်ခံမှု စနစ်သည် လျှပ်စစ်မီတာပေါက် မရသေးသော ကျေးရွာများတွင်သာ ကောက်ခံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒီးမော့ဆိုမြို့နှင့် ဖရူဆိုမြို့တွင်မှာလည်း လျှပ်စစ်ရုံးမှ ၀န်ထမ်းများက မီတာဖြတ်ပိုင်းကို အချိန်မှီ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ အချိန်မှီ ဖြန့်ဝေခြင်း မရှိသည့်အပြင် မီတာခ သွားရောက်ပေးသွင်းရမည့် နေ့စွဲ ကျော်လွန်ပါကလည်း ဒဏ်ငွေများ ထပ်မံပေးဆောင်ရကြောင်း ဖရူဆိုမြို့မှ ဒေသခံ အမျိုးသား တဦးက ပြောသည်။
8/25/2011 12:35:00 PM
နေပြည်တော် စီးပွားရေးမြှင့်တင်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်ကောင်းမရှိဟု ဖလုံ-စဝေါ်ပြောကြား
သြဂုတ်လ ၂၄ရက်။ (ကေအိုင်စီ)
ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အ လုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်ရောက်သူနှင့် ဆွေးနွေးချိန်နည်းသဖြင့် ရလဒ်ကောင်းမရှိဟု ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(PSDP) က ပြောသည်။
သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(MICC)တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီ ကိုယ် စားလှယ်များက ယင်းသို့ သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီ ဒုဥက္ကဌ စောမြထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး စဘီကျင်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ဥက္ကဌ နော်ယုဇန၀ါတို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသူများသလို ဆွေးနွေးချိန်မှာလည်း နည်းလွန်းသည်ဟု နော်ယုဇန၀ါ က ကေအိုင်စီကို ယခုလို ပြောပြသည်။
“ဒီသုံးရက်ဆွေးနွေးပွဲဟာ ကျမအမြင်မှာတော့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသဘော မဆောင်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးပွဲ စတင်တဲ့နေ့မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတယ်။ နောက်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေအားလုံး ၀န်ကြီးတွေပဲ ပြောကြဆိုကြ တယ်။ ကျန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဆွေးနွေးချိန် ၁၀မိနစ်ပဲဆိုတော့ သူမေးမယ်၊ ငါမေးမယ်နဲ့ မနည်းလုမေးရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်။”ဟု သူမက ပြောသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အခွန်ဝန်ကြီး၏ လယ်ယာခွန်များ
ပြန်လည်ကောက်ခံသင့်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေး ချက်အပေါ် ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီအနေဖြင့် မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးမှု မရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သူမက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
နော်ယုဇန၀ါက “နိုင်ငံတော်ဟာ လယ်ခွန်ယာခွန်တွေ လာပြီးမကောက်ခံဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ကောက်ခံကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း တဖက်တလမ်းက အခွန်ရအောင် လယ်ယာခွန်တွေ ပြန်လည် ကောက်ခံသင့်ကြောင်းပေါ့။ အခွန်ဝန် ကြီးက ပြောတယ်။ ကျမလည်း အခြားနိုင်ငံတွေလို ကောက်ခံမယ်ဆိုရင် အခြားနိုင်ငံတွေက ကောက်လို့ရတဲ့အခွန်တွေကို ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီး အကျိုးပြုကြတယ်။ ဥပမာ အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့်တို့ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံတွေလို လုပ်ပေးလို့
နိုင်မလားမေးတာ ဘယ်ဝန်ကြီးမှ ပြန်မဖြေပေးဘူး။”ဟု ဆိုသည်။
(စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဖလုံ-စဝေါ် ကိုယ်စားလှယ်များ)
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ဆွေးနွေးချိန်အဖြစ် ၁၀မိနစ်စီ ပေးထားသော်လည်း မေးချိန်ပင် မရ သည့်အတွက် ဆွေးနွေးခွင့်မပေးသည်နှင့် တူနေကြောင်းလည်း အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အခြားဖလုံစဝေါ်ပါ တီကိုယ်စားလှယ် စဘီကျင်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ငံတော် လိုငွေပြတာပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြားနေရတယ်။ မီးရထားဌာနနဲ့ မြန်မာစက်မှုဌာနတွေတော့ နှစ်တိုင်း အရှုံးပေါ်တယ်တဲ့။ ဒီဌာန ၂ဌာနကို ပုဂ္ဂလိကလက်ထဲ ပြောင်းရမလားပေါ့လေ။ အခွန်ကိစ္စတုိ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာတို့ ပါ တယ်။ သူတို့ဘာသာ သူတို့တင်ပြ ပြောကြဆိုကြတာ။ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တို့၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ ဘာမှမေးချိန် မရဘူး။ ဒါ ဆွေးနွေးခွင့်မပေးတာနဲ့တူတယ်လေ။”ဟု သူ၏အမြင်ကို ပြောသည်။
၎င်းစီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ခဲ့သလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့တွင် နာရီဝက်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုမှ မရှိပေ။
8/25/2011 12:33:00 PM
ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်း အဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကော်မတီကို ယမန်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက် သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော တိုင်းရင်းသားရေးရာ နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဌ အဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှဦးသိန်းဇော်ကို လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအဆိုပါ ကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ဦးစံထွန်းကို လည်းကောင်းခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထား သည်။
ဗိုလ်မှူးချူပ်ဟောင်း ဦးသိန်းဇော်သည် ယခင်စစ်အစိုးရ၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(ကြံ့ဖွံ့) ကချင်ပြည် နယ်မြစ်ကြီးနားမဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူ ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကော်မတီတရပ်လွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင် ချင်း အမျိုးသားပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဆလိုင်းကျဲအိုဘခ်ထောင်က ပြောသည်။
‘‘ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီဖွဲ့ဖို့က ကျနော်တို့ ညီနောင် ငါးပါတီ အရင်ဆုံး တောင်းဆိုတာပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့အသံကို အလေးထားပေးတယ်လို့ဆိုရမှာပေ့ါ’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ချင်း၊ ရှမ်း၊ရခိုင်၊ မွန် နှင့် ကရင် ပါတီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားညီနောင် ၅ ပါတီက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်၍ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီအဖွဲ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ခန့်အပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အများလေး စားကြည်ညိုခံရသူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သင့်သည်ဟု ဆလိုင်းကျဲအိုဘခ်ထောင် က ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားရေးရာ နှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီတွင် ပါဝင်မည့် အဖွဲ့ဝင်များကိုမူ ယခုအချိန်အထိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း
မရှိသေးကြောင်း နေပြည်တော်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက် နေသည့် ချင်း အမျိုးသားပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးငွန်မောင်းက ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ကျင်းပသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံသားများ မူလအခွင့် အရေးနှင့် ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် ငွေရေး ကြေးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံလွှာ ကော်မတီအပါ အဝင် ကော်မတီ (၈)ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
8/25/2011 12:31:00 PM
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ THE LADY ရုပ်ရှင် Trailer...
8/24/2011 09:21:00 PM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားတို့ တွေ့ဆုံစဉ်။ သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၁၁။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Mr Tomas Ojea Quintana) ဟာ ဒီနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနဲ့အတူ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေ အပြင် NLD ပါတီရဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မနက်ပိုင်းမှာတော့ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်တွင်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်း အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ဒီနေ့ နေ့လယ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတွေ့ခင် မနက် ၉
နာရီကနေ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲကျော်ထိ အင်းစိန်ထောင်ထဲကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ တွေ့ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၇ ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ထောင်တွင်းက အခြေအနေတွေ မေးမြန်းပြောဆိုခွင့် ရခဲ့သလို အင်းစိန်ထောင်ထဲက နေရာတချို့ကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အတူလိုက်ပါခဲ့သူ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရုံးရဲ့ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးအေးဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့ အင်းစိန်ထောင်သွားတော့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ဦးအောင်သိန်းရယ်၊ ဒေါက်တာ တင်မင်းထွဋ်ရယ်၊ မသိင်္ဂီ၊ ကိုဖြိုးဝေအောင်၊ ကိုဝင်းကျော်နိုင်၊ ကိုစည်သူဇေယျ၊ ကိုညီညီထွန်းတို့နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တခြား အကျဉ်းသားတွေ တွေ့ဖို့ဆိုတာ အချိန် တော်တော်လေး နည်းနေတဲ့အတွက် အစုံတော့ မတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကင်တားနား တောင်းဆိုထားတဲ့ စာရင်းအရ အကုန်လုံး ပေးတွေ့ပါတယ်။ နောက်တခါ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နည်းနည်းပါးပါး လှည့်ပတ် ကြည့်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ တရားစခန်း ဖွင့်တဲ့နေရာ၊ HIV
ဝေဒနာရှင်တွေကို ကုသတဲ့ နေရာပေါ့၊ အဲဒီနေရာတွေကို ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ ရက်ကြာအဖြစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကတည်းက ရောက်နေတဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်က နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့အရေး အခြေအနေတွေ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တခါ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်တွင်း မနေ့က သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့နဲ့လည်း တွေ့ဆုံသလို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနမှာ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းကိုလည်း
သွားရောက်ခဲ့ပြီး မနေ့ညက ရန်ကုန်ကို ပြန်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
8/24/2011 09:05:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မစ္စတာ ကန်တားနား တွေ့ဆုံသည့် ဓါတ်ပုံများ
8/24/2011 09:03:00 PM
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ပြင်းအား ငါး ဒသမ ကိုး ရစ်ချက်တာစကေး ရှိတဲ့ ငလျင် လှုပ်မှု တရပ် ဖြစ်ပွါးသွားခဲ့ပါတယ်။ RFA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ပြင်းအား ငါး ဒသမ ကိုး ရစ်ချက်တာစကေး ရှိတဲ့ ငလျင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ချိန်မှာ ရုံးအဆောက်အဦတွေပေါ်က ၀န်ထမ်းများကို လမ်းမပေါ်တွင် တွေ့ရပုံ။ ဓါတ်ပုံ - RFA
နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ငလျင်လှုပ်တာ ဖြစ်ပြီး အသင့်အတန် ပြင်းထန်တဲ့အတွက် လူတွေ အတော်လေး ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငလျှင်လှုပ်ပြီးပြီးချင်း အာအက်ဖ်အေ အသံလွှင့်ဌာန နဲ့ သမတအိမ်တော် အပါအ၀င် ၀ါရှင်တန်မြို့ထဲရှိ အဆောက်အဦးတွေထဲ လူအားလုံးကို အပြင်ဘက် ချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ သက်ဆိုင်ရာက အသိပေး အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ဟာ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း Mineral မြို့လေးကို ဗဟိုပြုပြီး မြေအောက် လေးမိုင်အနက်ကနေ လှုပ်ခဲ့တာလို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ငလျင်တာတိုင်းရေး ဗဟိုအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမြို့နဲ့ မိုင် ၂၀ အကွာမှာရှိနေတဲ့ နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖို စက်ရုံကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာက အရေးပေါ် ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
၀ါရှင်တန် မြို့တော်မှာ ရှိတဲ့ ရေဂင် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာလည်း လေယာဉ် ပျံသန်းမှုတွေကို ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရ ပါတယ်။
ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်ကို ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်သွားတဲ့ ငလျင်ဟာ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ သာမက Philadelphia, New York နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အပန်းဖြေ ရောက်ရှိနေတဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်အထိလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံ ခေါင်းစဉ်ကြောင့် ဂျာနယ်သတိပေးခံရ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်သော လူအများ အာရုံစိုက်သည့် မျက်နှာဖုံး သတင်းခေါင်းစဉ်ကြောင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးမှ သစ္စာဂျာနယ်ကို ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့သည်ဟု စာပေစိစစ်ရေး ဌာန အရာရှိတဦးက ပြောသည်။“နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ” ဟူသည့် သတင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိသည့် သစ္စာဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင် ပါရှိခဲ့သည်။“မြန်မာစာက အထားအသိုလွဲရင် အဓိပ္ပာယ် ပြောင်းသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုခေါ်သတိပေးတာပါပဲ။ အရေးယူတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး” ဟု အမည်မဖော်လိုသော စိစစ်ရေး အရာထမ်းကပြောသည်။ စာပေစိစစ်ရေးဌာနက မဇ္ဈိမ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားခြင်းမှာလည်း ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။ လူအများ အာရုံစိုက်သည့် မျက်နှာဖုံး သတင်း ခေါင်းစဉ်ကြောင့် သစ္စာဂျာနယ်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန စာပေစိစစ်ရေးမှ ခေါ်ယူ သတိပေး
ဂျာနယ်ဘက်ကမူ ယင်းသတင်းခေါင်းစဉ်ကို အထင်လွှဲမှားစေရန်
ထွင်ရေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ သတင်းခေါင်းစဉ်ကို တိုတိုကျစ်ကျစ်နှင့် စာဖတ် ပရိသတ် သိမှတ်လွယ်စေရန် အတိုချုံ့ ရေးသားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု အယ်ဒီတာချုပ်
ဦးမျိုးညွန့်မောင် က ပြောသည်။“ သတင်းခေါင်းစဉ်ကို တိုတိုကျစ်ကျစ်
ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ၊ အဓိကကတော့ ပုံကိုပဲ အားယူထား တာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကလည်း ရှည်ရင် ကျပ်သွားမှာ စိုးလို့လေ” ဟု ဦးမျိုးညွန့်မောင် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။သစ္စာဂျာနယ်က
စာပေစိစစ်ရေးသို့ မူကြမ်းတင်စဉ်နှင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရာတွင် ကွဲလွဲမှု အချို့ ရှိခဲ့သည်ကိုလည်း သတိပေး ပြောဆိုလိုက်သည်ဟုလည်း အထက်ပါ စိစစ်ရေး အမှုထမ်း က ပြောသည်။သစ္စာသတင်း ခေါ် True News ဂျာနယ်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် “ဂျာနယ် တာဝန်ယူရန်” ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် သတင်းကို ဖော်ပြမှုဖြင့် စာပေစိစစ်ရေး၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ပိတ်ပင်မှု ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအပြင်၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၌ မြန်မာကလေး လုပ်သားတဦး အလုပ်လုပ်နေသည့် ဓါတ်ပုံအားဖေါ်ပြခဲ့သဖြင့် ၂ လ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရ ထုတ်ဝေခွင့် နှစ်ပတ် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရဖူးသည်။ယခင်က ပြည်တွင်း ဂျာနယ်များတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုံများအား ဖေါ်ပြခွင့် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသော်လည်း သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံသည့် ပုံများ အပါအဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံနှင့် သတင်းများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်ကို လျော့ချပေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ဖေါ်ပြခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းသည် မီဒီယာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ လမ်းဖွင့်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စိစစ်ရေး တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။“ကျနော်တို့ သွားနေတာကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ အညီ စာပေ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လာတာပဲ။ တဘက်ကလည်း စာပေခေတ်ရေစီးကြောင်း အရလည်း ဖွင့်ပေးလာရတာပဲ” ဟု သူကပြောသည်။အစိုးရသစ်
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၏ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းတွင် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည့် စာနယ်ဇင်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အလေးထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းများမှတဆင့် ပြည်သူများ သိသင့်အချက်များကို အသိပေးသွားဖို့ လိုသလို ထိုစာနယ်ဇင်းများ၏ အပြုသဘောဆောင် အကြံပြုချက်များကိုလည်း အလေးထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရှေးရှုသည့် ခြေလှမ်းတရပ် အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက သတင်းမီဒီယာများ၏ ဝေဖန်အကြံပြုမှုကို ခံယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ပြန်လည် စတင်သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဒုတိယ ပုံမှန် အစည်း အဝေးတွင် ပြောသွားသည်။ ထိုနေ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် သတင်းမီဒီယာများကို ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် စတင် သတင်းယူခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သစ်ထူးလွင်
8/24/2011 08:54:00 PM
ကျန်း​မာ​ရေး​စနစ်​ကောင်း​ရန် ကျပ်သန်း​၈,၀၀၀ နှစ်စဉ်လိုအပ်​နေဟုဆို
ကျန်း​မာ​ရေး​ပြုစု​စောင့်​ရှောက်မှုစနစ် အား​နည်း​ချက်​နေပြီး​ကောင်း​မွန်ပြည့်​စုံ​အောင် လုပ်​ဆောင်ဖို့​နှစ်စဉ် ကျပ်သန်း​၈,၀၀၀ လောက် လိုအပ်မယ်လို့​ကျန်း​မာ​ရေး​ဝန်ကြီး​ဒေါက်တာ​ဖေသက်ခင်က ပြောကြား​ပါတယ်။
ဒီ​နေ့​အမျိုး​သား​လွှတ်​တော် အစည်း​အ​ဝေး​မှာ ကိုယ်စား​လှယ် ဦး​တင်ယုက တိုင်း​ဒေသကြီး​တွေနဲ့​ပြည်နယ်အဆင့်​ရှိ ဆေး​ရုံ​တွေမှာ ဆေး​ဝါး​လုံလုံ​လောက်​လောက်နဲ့​ပြည်သူလူထုကို ကျန်း​မာ​ရေး​ကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်မှု​ပေး​ဖို့​အစီအစဉ်မရှိမရှိ မေး​မြန်း​တာ ကို ပြည်​ထောင်စုကျန်း​မာ​ရေး​ဝန်ကြီး​က ပြန်​ဖြေရာမှာ ဒီလို​ပြောသွား​တာပါ။
အမျိုး​သား​လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ်တဦး​ဖြစ်တဲ့​ဦး​ဘုန်း​မြင့်​အောင်က “သူတို့​ကျန်း​မာ​ရေး​ဌာနက​နေလည်း​လုပ်ငန်း​တွေကို ပြည့်​စုံစွာ လုပ်ကိုင်ဖို့​အတွက်ဆိုရင် အ​ခြေခံ​ရောဂါ​တွေအတွက် ပြည့်​ဝစွာ လုပ်နိုင်ဖို့​အတွက် တနှစ်ကို သန်း​၈၀၀၀ လောက်လိုအပ်​နေတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​သူတို့​ရတာ ၃၅၀၀ လောက်ပဲရတယ်။ အဲဒါ​တွေကို ပြည့်​ပြည့်​ဝဝရဖို့​ဆိုရင် သန်း​၈၀၀၀ တောင်း​တဲ့​သ​ဘော​ပေါ့​” လို့​ပြောပြပါတယ်။
နဲ့​ပတ်သက်လို့​အား​နည်း​ချက်ရှိတာ​တွေ မှန်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ဖွံ့​ဖြိုး​ပြီး​နိုင်ငံ​တွေမှာ​တောင် ရာနှုန်း​ပြည့်​ကျန်း​မာ​ရေး​ထောက်ပံ့​မှု မရှိပါဘူး​။”
နအဖစစ်​ကောင်စီက အာဏာလွှဲ​ပြောင်း​ပေး​ချိန်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့​တဲ့​ဘတ်ဂျက် ဥပ​ဒေအရ​တော့​ဒီဘဏ္ဍာ​ရေး​နှစ်အတွင်း​ကျန်း​မာ​ရေး​ကဏ္ဍအတွက် အသုံး​စရိတ် ကျပ် သန်း​၉,၀၀၀ ကျော် သတ်မှတ်ပြဌာန်း​ထား​ပါတယ်။ သာမန်အသုံး​ငွေ ကျပ်သန်း​၆,၅၀၀ ကျော်နဲ့​ငွေလုံး​ငွေရင်း​သုံး​ငွေ ကျပ်သန်း​၂,၅၀၀ ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့​လွှတ်​တော်မှာ​တော့​ကျန်း​မာ​ရေး​ကဏ္ဍနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ကိုယ်စား​လှယ် ဒေါက်တာ​မောင်​မောင်ဝင့်​က မြန်မာနိုင်ငံ​ဆေး​ကောင်စီကို လွတ်လပ်တဲ့​ပညာရှင်အဖွဲ့​အ စည်း​အဖြစ် ရပ်တည်ခွင့်​ပေး​ဖို့​အမိန့်​ထုတ်ပြန်​ပေး​ဖို့​နဲ့​ဆေး​ပညာရှင်များ​ကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်​ရေး​အဖွဲ့​ဥပ​ဒေပြဋ္ဌာန်း​ဖို့​စတဲ့​အဆို​တွေကို တင်ပြသွား​တယ်လို့​အမျိုး​လွှတ်​တော် ကိုယ်စား​လှယ် ဦး​ကြည်မြင့်​(လသာ) က ပြောပြပါတယ်။
ဆေး​ကောင်စီကို အစိုး​ရ​ဘော်ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့​လွတ်လပ်တဲ့​ပ​ရော်ဖက် ရှင်နယ်​ဘော်ဒီအဖြစ် လွတ်လပ်စွာရပ်တည်ခွင့်​အမိန့်​ကို ထုတ်ပြန်​ပေး​ဖို့​အဆိုတင်သွင်း​တယ်။ နောက်တခုက​တော့​ဆေး​ပညာရှင်များ​ကာကွယ်​ရေး​အဖွဲ့​အတွက် လိုအပ်တဲ့​ဥပ​ဒေ၊​နည်း​ဥပ​ဒေများ​ကြေညာစာတမ်း​တင်သင့်​ကြောင်း​အဆို​ပေါ့​။”
ဆေး​ပညာရှင်​တွေဘက်က အကာအကွယ်​ပေး​မယ့်​အဖွဲ့​အစည်း​၊​ဥပ​ဒေ​တွေ လိုအပ်​နေ​ကြောင်း​၊​ဥပမာ၊​လူနာတဦး​သေဆုံး​မှုနဲ့​ပတ်သက်လို့​ပုဂ္ဂလိကကအထူး​ကု​ဆေး​ခန်း​နဲ့​အထူး​ကုဆရာဝန်ကြီး​တို့​ဖြစ်ပွား​သွား​တဲ့​အငြင်း​ပွား​မှုမျိုး​မှာ ပညာရှင်ဘက်က ရပ် တည်​ပေး​ဖို့​လိုအပ်​နေပုံကို ဥပမာ​ပေး​ပြီး​တင်ပြသွား​တာလို့​ဆိုပါတယ်။
8/24/2011 06:22:00 PM
မနေ့က နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း အရ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ (၆၉၀) ကျပ်ဈေးပေါက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Photo: RFA
အမေရိကန်နိုင်ငံသုံး တဒေါ်လာတန်ငွေစက္ကူ။ Export Earning လို့ ခေါ်တဲ့ ပို့ကုန်ရငွေကတော့ မနေ့က ပိတ်ဈေး တစ်ဒေါ်လာကို (၇၂၀) ကျပ်နဲ့ FEC လဲလှယ်နှုန်းကတော့ တစ်ဒေါ်လာကို ၆၃၅ ကျပ်နှုန်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတန်ဖိုး ကျပ် ၇၀၀ အောက်ကို ကျဆင်းသွားတာကြောင့် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင် တချိူ့ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ စဉ်းစားလာနေတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောပါတယ်။
အလုပ်လုပ်တိုင်း ရှုံးနေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တရုတ်တန်းဘက်က ကုန်သည်ကြီးတွေက
အလုပ်ရပ်ဆိုင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်း၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေ တက်လာအောင် အခွန်လျှော့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်စည် ခေတ္တ ပြန်တက်လာပေမဲ့ ဒေါ်လာဈေး ကျတဲ့အတွက် ပို့ကုန်သမားတွေက မ၀ယ်နိုင်တော့ဘဲ ဈေးပြန်ကျသွားတယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက် စီးပွားရေးမှာ တရားမ၀င် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အရှိန်အဟုန် ကြီးမားနေတာကြောင့် ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နိုင်မယ့် အလားအလာတွေကို တရားဝင် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က ခန့်မှန်း တွက်ဆရ ခက်နေတယ်လို့လည်း စောစောက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က ပြောပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် လုပ်ငန်းတွေမှာ အခြေအနေတွေ တဖြေးဖြေး ဆိုးရွားလာနေတာကို လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ အတော်လေး စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အစိုးရဘက်က ပို့ကုန် အခွန်ငွေတွေ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးတာ၊ နိုင်ငံခြားပိုက်ဆံကရတဲ့ အခွန်ငွေလျှော့ပေးတာ၊ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း
ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလို စီးပွားရေး တရှိန်ထိုး ကျဆင်းလာတာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အပါအ၀င် အကြောင်းရင်း ရောဂါ ဇစ်မြစ်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှ ပြေလည်မယ်လို့ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောဆိုနေပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းလာတဲ့ ဂယက် အကြောင်းကို မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မကွေးတိုင်းအတွင်း လယ်မြေအသိမ်းခံရသော လယ်သမားများကို ကူညီသည့် ရှေ့နေ ဦးတင်အောင်ထွန်းသည် မကြာသေးခင်က ရှေ့နေလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တခု။ မြန်မာလယ်သမားများသည် လယ်သိမ်းခံရမှုကဲ့သို့သော အနိုင်ကျင့်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ၎င်းတို့ကို ကူညီသည့် ရှေ့နေများလည်း အနှောင့်အယှက်ပေးခံနေရသည်။ (ဓာတ်ပုံ - Rafael Parrilla)
အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ကြောင်း ကြော်ငြာစာကို တနင်္လာနေ့က မင်းဘူးမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ကပ်ထားသည်ဟု ဦးတင်အောင်ထွန်းက ဆိုသည်။“အကြောင်းပြထားတာက
ကျနော်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ အမှုတွေမှာ အခြေအနေမကောင်းရင် အမှုသည်တွေက တိုင်စာပို့တဲ့အခါ ကျနော်က တိုင်စာတွေ ရေးပေးတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတယ်။ အမှုလိုက်တဲ့အခါ ကောင်းသတင်းကျော်ဇောတာ မဟုတ်ဘူး၊ ရှေ့နေကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့အညီ
အမှုလိုက်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတွေကို စုံစမ်းမှု အစီရင်ခံစာအရ စိစစ်တွေ့ရလို့လို့ ရေးထားတယ်” ဟု ဦးတင်အောင်ထွန်းက ပြောသည်။သြဂုတ်လ
၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စုတရားရုံးလွှတ်တော်ချုပ်၊
တရားသူကြီးများ၏ အစည်းအဝေးတွင် ရှေ့နေအဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကြော်ငြာစာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။ ရှေ့နေလိုင်စင် ရုတ်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။“တရားရုံးက ထုတ်ပစ်ပြီးသားအမိန့် ဆိုတော့လည်း ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ မသိသေးဘူးပေ့ါ။ သူတို့ပြောသလိုတော့ ကျနော့်မှာ အဲ့ဒီလို အမှုတွေ မရှိဘူးဗျ။ သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာကလည်း ဘယ်လိုစစ်ဆေး သိရှိလည်းဆိုတာ ကျနော်လည်း နားမလည်ဘူးဗျ။ ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်” ဟု ဦးတင်အောင်ထွန်းက ပြောသည်။တရားခွင်အတွင်းသို့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိတော့သဖြင့် ပြင်ပတွင် ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဆက်လက်ကူညီမည်ဟု ဆိုသည်။ဦးတင်အောင်ထွန်းကို သူ၏မျက်ကွယ်တွင် စီရင်ချက် ချမှတ် အရေးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်မှ ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။“ဒီလို
ရှေ့နေတယောက်ကို အရေးယူတယ်ဆိုတာ တဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ သူ့ကို ကြားနားခွင့်ပေးရမယ်။ ပြီးမှ အပြစ်ပေးထိုက်တယ် မပေးထိုက်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်သင့်တယ်။ အခုက တရားမျှတတဲ့ လုပ်ရပ်တော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။ဦးတင်အောင်ထွန်း အရေးယူခံရခြင်းသည် မကြာသေးမီက ပေါ်ပေါက်လာသော ရှေ့နေကွန်ရက်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကူညီခြင်း၊ စာနယ်ဇင်းသမားတို့၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကို ဖြေကြားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေများက ယူဆနေကြသည်။ယခုနှစ် မတ်လက ကံမမြို့နယ်၊ စစ္စရံရွာမှ လယ်သိမ်းခံရသော လယ်သမား တချို့ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်ကျော် ချမှတ်ခံရသည်။ ထိုလယ်သမားများအရေးကို ဦးတင်အောင်ထွန်းက ကူညီဆောင်ရွက်ရာ လယ်သမား ၅ ဦး ထောင်ဒဏ် ၃ လ ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြသည်။ထိုဒေသတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်က သိမ်းဆည်းလိုက်သည့် လယ်မြေဧက ၄၀၀၀ ကျော်
ပြန်ရရှိရေးအတွက် စွဲဆိုထားသည့်အမှုမှာ ပြီးပြတ်ခြင်း မရှိသေးပေ။မကွေးတိုင်း
နတ်မောက်မြို့တွင် လယ်သိမ်းခံရပြီး တရားစွဲခံရသူလယ်သမားတို့ကို ကူညီသည့် ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူသည်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရဖူးသည်။
8/24/2011 06:17:00 PM
ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ပုဂ္ဂလိက ပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် မူကြမ်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးက တင်သွင်း ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ AFP PHOTO/POOL/NYEIN CHAN NAING
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပထမ အကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဒုတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် သဘာပတိ အမှာစကား ပြောကြားသည့် မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီမူကြမ်းကို၊ ပညာရေး အရည်အသွေး မြင့်မားရေး အတွက် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခြေခံပညာ သင်ရိုး ညွှန်းတန်းနဲ့ ဘာသာရပ်တွေ အတိုင်းဖြစ်စေ၊ အဲဒီ ဘာသာရပ်တွေ အတွက် သင်္ခန်းစာ တွေကို ထပ်ဆောင်း သင်ကြားပေးတဲ့ ပုဂ္ဂလိက တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ကျောင်းတွေကို ဆိုလိုတယ်လို့ ဖော်ပြ ထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော် တက်နေတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ တင်တဲ့သူက ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေးက တင်တာပါ။ သူက ဥပဒေ မူကြမ်းကို ဖတ်ပြတယ်။ လွှတ်တော်က ဆွေးနွေးဖို့ ဆွေးနွေးမယ့် သူတွေဟာ လာမယ့် ၂၉ ရက်နေ့ ထိအောင် ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာကို လွှတ်တော်ကို အချိန်မီ တင်သွင်းပါတဲ့”
အဲဒီ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေဟာ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်း တခုခုက ဦးစီး တည်ထောင်သော၊ ဒါမှမဟုတ် ထို အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ တည်ထောင်သော ကျောင်း မဖြစ်စေရ ဆိုပြီး ဖော်ပြ ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံသား တဦး ကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ တည်ထောင်သူဟာ ငွေကြေး၊ မြေနေရာ၊ စာသင်ဆောင်၊ ကျောင်းသားတွေ နေထိုင်ဖို့ အဆောင်၊ ပစ္စည်း ပရိဘောဂတို့ ရင်းနှီး စိုက်ထုတ် နိုင်သူ ဖြစ်ဖို့ လိုသလို၊ သင်ကြားမယ့် ဆရာ-ဆရာမတွေ ကလည်း ဆရာအဖြစ် သင်ကြားခွင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ရပြီးသူ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။
ဒီမူကြမ်း အတည်ဖြစ်နိုင်ဖို့ အတွက် လွှတ်တော်မှာ လာမယ့် ရက်တွေ အတွင်း ဆွေးနွေး ကြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
8/24/2011 06:12:00 PM
လစ်ဗျားသူပုန်များ ကဒါဖီ၏ နေအိမ်ခြံဝင်းကို သိမ်းပိုက် (ရုပ်သံ)
ကဒါဖီ အိမ်ဝင်းကို သူပုန်သိမ်း
Gaddafiကဒါဖီ အိမ်ဝင်းကို သူပုန်တွေ ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်လစ်ဗျား နိုင်ငံ ထရီလိုလီ မြို့တော်မှာ မနေ့က သူပုန်တွေနဲ့ ကဒါဖီကို ထောက်ခံ သူတွေ တနေ့လုံး အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီးနောက် ကဒါဖီရဲ့ နေအိမ် ဝင်းကို သူပုန်တွေက သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူပုန်တွေက အိမ်ဝင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ကဒါဖီရဲ့ ရုပ်ထုက ခေါင်းကို ဖြုတ်ပြီး မြေကြီးပေါ်မှာ ဘောလုံး လုပ်ကန်ကြပါတယ်။မြို့လယ်ခေါင်က ရင်ပြင်မှာလည်း လာရောက် စုဝေးသူ ရာချီရှိပြီး ကြွေးကြော်သံတွေ ဟစ်အော် အောင်ပွဲ ခံခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားက ဧည့်သည်တော်တွေကို လက်ခံ တွေ့ဆုံရာမှာ သုံးတဲ့ တဲလည်း မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကဒါဖီကို သစ0x081စာ စောင့်သိသူတွေက ထရီပိုလီ မြို့ထဲကနေ ခုထိ ခံတိုက်နေပြီး ကဒါဖီ တပ်တွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နေရာတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားက သတင်းထောက်တွေ တည်းနေတဲ့ ဟိုတယ် ရှိရာ ရပ်ကွက်လည်း ပါပါတယ်။ကဒါဖီနဲ့ သူ့သားတွေကို မတွေ့မချင်း အပြည့်အဝ အောင်ပွဲခံကြမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က သတင်း ပို့ပါတယ်။ကဒါဖီ ရေဒီယို မိန့်ခွန်းGaddafiအာဇာနည် အဖြစ် အသေခံမယ်လို့ ကဒါဖီပြောခုထိတော့ ကဒါဖီနဲ့ သာတွေ ဘယ်ရောက် နေသလဲ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ဒီအတော အတွင်းမှာ ကဒါဖီရဲ့ ရေဒီယို မိန့်ခွန်းကို နိုင်ငံတွင်းက အသံလွှင့်ရုံ တခုက ထုတ်လွှင့် သွားပါတယ်။နေတိုးကို အနိုင် ယူနိုင်ရင် အနိုင်ယူ၊ မဟုတ်ရင် အာဇာနည် အဖြစ်နဲ့ အသေခံမယ်လို့ ကဒါဖီက မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောပါတယ်။လစ်ဗျား အစိုးရ လိုလားတဲ့ ရုပ်သံလိုင်း တခုက အစိုးရ ပြောခွင့်ရ တာဝန်ခံနဲ့ တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံခန်းလို့ ပြောတဲ့ ထုတ်လွှင့်ချက် တခုကိုလည်း ထုတ်လွှင့် သွားပါတယ်။နိုင်ငံတကာ တုန့်ပြန်မှုဒီအတောအတွင်းမှာဘဲ ဥရောပ သမဂ0x081ဂရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ အကြီးအကဲ ကက်သရင်း အက်ရှတန်က လစ်ဗျား နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်မှာ ကုလသမဂ0x081ဂဟာ ဦးဆောင် ကဏ0x081ဍက နေသင့် တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း အစောပိုင်းက သူတို့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေါ်လာ တစ် ဒဿမငါး ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လစ်ဗျား နိုင်ငံရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အပြောင်း အရွှေ့ ပြန်လုပ် နိုင်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ဂျာမန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက လစ်ဗျား ပိုက်ဆံတွေကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ ကုလသမဂ0x081ဂကနေ ပြဌာန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုနေပြီး တူရကီ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကလည်း ဒီကိစ0x081စကို အနောက်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေ ခုသီတင်းပတ် အစ0x081စတန်ဘူမှာ အစည်းအဝေးခေါ် ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝီလီယံဟိတ်ဂကတော့ ထရီပိုလီက အခြေအနေဟာ အန0x081တရယ် ရှိနေဆဲပဲလို့ သတိပေးလိုက်ပြီး သတင်း တခုခုပေါ်မှာ ရာနှုန်းပြည့် ယုံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ သတိပေးနေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သိန်းစိန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အတွင်းသတင်းများ
ဒေါ်စု နဲ့ သိန်းစိန် တွေ့စဉ်- ဒုသမ္မတ တင်အောင်မြင့်ဦး တက်ခွင့်မရ။ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေလဲ တက်ခွင့်ရ၊ ကြံ့ဖွံ့ခေါင်း ဆောင်တွေ သိပ်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်လို့ သိရ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဗွီအိုင်ပီလို ပြုစုဆက်ဆံတယ်လို့ သိရ။ ဒေါ်စု က ရောက်ကာစက ခပ်တောင့်တောင့် ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ လူတိုင်း ပြုံးပြုံရီရီဖြစ်လာတယ်လို့ ဆို။ ဒေါ်စုနဲ့ အတူ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်တချို့ပါ၊ ဖရော်ဖက်ဆာ ရီရီမြင့် လဲ ဒေါ်စု နဘေးမှာရှိတယ်။ အစိုးရဖက်ကတော့ ဦး အောင်ကြည် (အလုပ်သမား)၊ ဦးအောင်မင်း (မီးရထား)၊ ဦးစိုးသိန်း(စက်မှု)၊ မေဂျာသိန်းဌေး (နယ်စပ်) တို့ တက် ရောက်တယ်။ သူတို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သိပ်ဖြစ်ခြင်တယ်လို့ ဆို။ ဒီထဲမှာ ဦးအောင်မင်းက ဖိုးတက်ကြွလို့ သိရ။ ဒေါ်စု အစည်းဝေးခန်းမအလာမှာ ပေါ်တီကိုမှာ ၀င်းအောင်၊ ဇော်ဇော်၊ အောင်သက်မန်း တို့က ဒေါ်စု လီမွန်ဇင်းကို လာဖွင့်ပေး ကြဟု သိရ။ ဒီအခြေအနေကို ဒီချုပ်က အကောင်းမြင်ပုံရ။ ကြေညာချက်ထုတ် အကောင်းမြင်ဟုဆို။ တင်အောင်မြင့်ဦး အရမ်းပေါက်ကွဲနေဟု သိရ။
အစိုးရအတွင်းအခြေအနေက နှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ်။ သန်းရွှေ သြဇာ တနေ့တခြား ကျဆင်းနေတယ်။သိန်းစိန်နဲ့ စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တွေက သန်းရွှေ နဲ့ခပ်ဝေးဝေး ခပ်ရှောင်ရှောင်လုပ်လာကြတယ်။ သမ္မတအုပ်စုက တင်အောင်မြင့်ဦး နှင့် ကျော်ဆန်း
ကို ကိုမနှစ်မြို့။ ဥပမာ ဦးအောင်မင်း က မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကို သူ့စားပွဲပေါ် မတင်ရန် ၀န်ထမ်းတွေကို ကြိမ်းမောင်း – ဒီသတင်းစာကိုတွေ့ရင် အံချင်တယ်ကွဟု ဆို။ ရွှေမန်းက သိန်းစိန်ကို ပိုမိုထောက်ခံလာ။ ပိုနီးစပ်လာ။ သန်းရွှေ အနားမယူခင်က သူ့လုံခြုံရေးတပ်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့။ သို့သော် မကြာသေးခင်က သူ့အတွက် လုံခြုံရေးယူ ပေးနေတဲ့ တပ်ဖွဲ့များ လျော့ချလာသည်ကိုတွေ့ရ။ ဦးနေ၀င်း အသက် ၉၀ မွေးနေ့ပွဲအပြီး သူ့လုံခြုံရေးတပ်များကို သန်း ရွှေ မောင်အေး ဂိုဏ်းက လျော့ချသကဲ့သို့ ရှိနေတယ်။
ဦးနေ၀င်းသေပြီး ၂ ရက်အတွင်း ဦးစိန်လွင်အိမ်ရှေ့က လုံခြုံရေးတပ်ကို လူပြောင်းတာ လျော့ချတာ လုပ်သကဲ့သို့ ဖြစ် နေ။ မင်းအောင်လှိုင် က သန်းရွှေ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲဝင်အများစုမှာ တပ်ထွက်များနှင့် ပြန်လည်စုဖွဲ့ ပေးခဲ့သည်မှာ ထူးခြား နေတယ်။
မင်းအောင်လှိုင်က သန်းရွှေစိတ်ကြိုက် ရွေးခဲ့သူဖြစ်။ အရည်အချင်းမရှိ။ တပ်တွင် လူကြိုက်နည်းခဲ့သူဖြစ်။ လူကြိုက်များ သူမှာ မြင့်အောင် ဖြစ်။ မြင့်အောင်စကားမှားသောကြောင့် တပ်ချုပ်အဖြစ်လျာထားပြီးမှ ဖယ်ရှားခံရ။ မင်းအောင်လှိုင် အပြောင်းအလဲကို ကျနော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေ။ သိသာရန်ပေးပို့။ ကောင်းသည့်အချက်ကတော့ တပ်ထဲတွင် သန်းရွှေ ပြန်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြ။ မလိုချင်တော့။ တပ်ထဲတွင် ဟာသပင်လုပ်နေ- ဦးသိန်းစိန်ရေ သေချာအောင် လုပ်ပေးပါ။ မသေချာရင် အားလုံးသေမှာဟု နောက်ပြောင်နေ။
ရွှေမန်း၊ သန်းရွှေ ကို စိတ်နာနေတယ်။ သမ္မတနေရာကို သူ့ကိုပေးမယ်လို့နှစ်ကိုယ်ကြား ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးဟု သိရ။ သူ့ကို အယုံသွင်းပြီး ခွေထားခဲ့ဟု ခံစားနေရ။
တင်အေး- အခြေအနေမကောင်း။ သူရောသူသားရော သြဇာကျဆင်း။ တင်းအေးကလဲသန်းရွှေကိုရှောင်နေတယ်ဟုသိ ရ။ သူက သန်းရွှေ ညာလက်ရုံးဟု အပြောခံခဲ့ရသူဖြစ်။ သူကိုလည်း သန်းရွှေ က ဇယားရွေ့ခဲ့သည်ဟု ခံစားရ။ သူသား က ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က ဒေါ်စုကို ပင် နှုတ်ဆက်ခဲ့သည့်အထဲမှာလည်း ပါဝင်နေတယ်။
ဌေးဦး- ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက သူကိုသန်းရွှေ က ဒုသမတ နေရာပေးမယ်လို့ အယုံသွင်းခံခဲ့ရဟု သိရ။ သန်းရွှေ ကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်တော့သူ ဖြစ်လာ။ လုံးဝ
အောင်သောင်း နဲ့ သိန်းဇော်- သန်းရွှေ ကို ဆက်ချစ်နေသူများဖြစ်ဟု ယူဆရ။ ဆက်လက်ထောက်ခံနေဆဲဟု သုံးသပ်ရ။
မင်းအောင်လှိုင်- တပ်ကို သန်းရွှေ နဲ့ ဝေးရာသို့ ပို့နေဟု ယူဆရ။ သူက ရွှေမန်း ကို တလ တကြိမ်တွေ့ဆုံနေသည်ကို တွေ့ရ။ သူ့သြဇာမခံသူဟု ယူဆရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သုံးဦးကို ဖြုတ်လိုက်။
ဦးမြင့်- ဦးမြင့်စာတန်းက အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို သက်ရောက်မှုရှိ။ အထူးသဖြင့် ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကို မပြောင်းလဲနိုင် ပါက လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြစ်နိုင်သည်ကို အထူးစိုးရိမ်ကြ။ ကျပ်-ဒေါ်လာ လဲနှုန်း ၆၀၀ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ပျက်ပြီဟု စီးပွားရေးသမားအများစု ယုံကြည်နေ။
8/24/2011 10:10:00 AM
ကဒါဖီ ဌာနချုပ်ဝန်းနားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်
ကဒါဖီ ဌာနချုပ်ဝန်းနားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီရဲ့ ဌာနချုပ်ဝန်းနားမှာ ပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ထရစ်ပိုလီမြို့တော်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေ ထိန်းချုပ်ထားဆဲ ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေနားဆီ သူပုန်တပ်ဖွဲ့တွေ ရှေ့တိုး ဝင်ရောက်လာဖို့ ကြိုးစားနေရာမှာ နှစ်ဖက် အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာ နေပါတယ်။Bab al-Azizya မှာ ရှိတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ ဌာနချုပ် စခန်းကို သူပုန်တွေက ထိုးစစ်ဆင်မှု ကြီး တစ်ခု လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ အရ သိရပြီး နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တွေ ရှိနေရာ ဟိုတယ်နားမှာ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်သံတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။လစ်ဗျား ပဋိပက0x081ခဟာ ဆုံးခန်းတိုင်ခါနီးနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်စဉ်တွေဟာ အရှိန်အဟုန် မြန်မြန်နဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ နေတိုးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ကဒါဖီ အစိုးရလက်ကျန်တွေအနေနဲ့ ရှုံးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲကို ဝင်တိုက်နေတာသာ ဖြစ်တယ် လို့ နေတိုး ပြောခွင့်ရ ပုဂ0x081ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။သူပုန်တွေကို ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ ကဒါဖီရဲ့သား ဆေ့ဖ် အယ်လ် အစ0x081စလမ် ကပြောအစောပိုင်းတုန်းက ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီရဲ့ သား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆေ့ဖ် အယ်လ် အစ0x081စလမ် က သူပုန်တွေကို အစိုးရတပ်တွေက ထောင်ချောက် ထဲ သွင်းပြီး ပြန်တိုက်နေပြီလို့ ပြောပါတယ်။သူ့ကို ဖမ်းဆီးမိလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အစောပိုင်းက ပေါ်ထွက်ခဲ့အပြီးမှာ မနေ့ညက ထရစ်ပိုလီ မြို့တော်မှာ လူရှေ့ ထွက်ပြလာ ခဲ့တာပါ။သူ့ဖခင် ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီဟာ ထရစ်ပိုလီ မြို့တော်မှာပဲ ဘေးမသီ ရန်မခ ရှိနေတယ်လို့ ဆေ့ဖ် အယ်လ် အစ0x081စလမ် က အခိုင်အမာ ပြောသွားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ ရဲ့ နောက်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက် ဟာလည်း ထိန်းသိမ်းခံ ထားရာကနေ လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
''မြန်မာမှန်လျှင် ဇာတ်ပွဲ ကြည့်ဖူးရမည်။ မြန်မာမှန်လျှင် ပုဂံရောက် ဖူးရမည်။''
အထက်ပါစကားကို ပုဂံရောက် စာရေးဆရာတစ်ဦး ပြောဖူးပါသည်။ မြန်မာမှန်လျှင် အပျော်အပါးကို နှစ်သက်သည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမည်။ ယဉ်ကျေးမှုကို ခုံမင်မည်။ အနုပညာကို မြတ်နိုးမည် စသော သဘောတို့ဆောင်မည် ထင်ပါသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတွင် အခြေချ နေထိုင်သော ပုဂံသူ၊ ပုဂံသားတို့ကား မြန်မာစင်စစ် ဖြစ်ကြသည်မို့ ဘာသာတရားကိုလည်း ကိုင်းရှိုင်း၏။ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း မြတ်နိုး၏။ ဘာသာ၊ သာသနာကို အခြေခံ၍
ကျင်းပသော ပျော်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲ တို့ကိုလည်း သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ကျင်းပကြ၏၊ သူ့ဘုရား၊ ကိုယ့်ဘုရားပြိုင်သည်။ သူ့အရပ်၊ ကိုယ့်အရပ် သူ့ဇာတ်၊ ကိုယ့်ဇာတ် ပြိုင်ကြသည်။ သူ့အသွင်း၊ ကိုယ့်အသွင်း ပြိုင်တတ်ကြသည်။
ပုဂံတွင် ၀ါဝင်ပြီ ဆိုသည်နှင့် ကိုယ့်ရပ်၊ ကိုယ့်ရွာ ဘုရားပွဲအတွက် တိုင်ပင်ကြသည်။ ဆွေးနွေးကြသည်။ ၀ယ်ခြမ်းကြသည်။ တစ်နယ်တစ်ကျေး ရောက်နေသူများက ပွဲတော်အမီ ကိုယ့်ရပ်ဌာနီသို့ ပြန်လာကြသည်။ ပုဂံပွဲတော်တို့သည် ၀မ်းရေး အတွက် ဝေးတစ်မြေရပ်ခြား ပြေးလွှား ခွဲခွာနေရသော မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများကို ပြန်လည် တွေ့ဆုံစေရာ ဆုံဆည်းရာလည်း ဖြစ်သည်။ သူရပ်၊ ကိုယ့်ရပ်သူ့အိမ်၊ ကိုယ့်အိမ်၊ လူမှု၊ စီးပွားရေချိန် တိုင်းထွာရာ ပြဒါးတိုင်ပမာလည်း ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်၊ သံသရာ နှစ်ဖြာအကျိုးအတွက် ဒါနမိုးတို့ ရွာသွန်းဖြိုးရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။
ပုဂံပွဲတော်တို့သည် ၀မ်းရေးအတွက် ဝေးတစ်မြေရပ်ခြား ပြေးလွှား ခွဲခွာနေရသော မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများကို ပြန်လည် တွေ့ဆုံစေရာ ဆုံဆည်းရာလည်း ဖြစ်သည်။ သူရပ်၊ ကိုယ့်ရပ် သူ့အိမ်၊ ကိုယ့်အိမ်၊ လူမှု၊ စီးပွားရေချိန် တိုင်းထွာရာ ပြဒါးတိုင် ပမာလည်း ဖြစ်သည်...
ပုဂံ ဘုရားပွဲတော်များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြည့်လျှင် ဆွမ်းလုံး၊ သပိတ်လုံး ကပ်လှူပွဲပါသည်။ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲပါသည်။ လင်ပန်းထိုးပါသည်။ ရွှေသွင်း၊ ငွေသွင်း၊ အရုပ်သွင်းပွဲများ ပါသည်။ တချို့က
လှည်းဇာတ်ပါသည်။ ရိုးရာဓလေ့ ချောတိုင်တက်ပွဲ၊ ခေါင်းအုံးရိုက်ပွဲတွေ ပါသည်။ လူငယ်တို့၏ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဘောလုံးပွဲလေးများ ပါသည်။ ဇာတ်ပွဲ၊ ကြည့်ချင်ပွဲ၊ တရားပွဲများလည်း ပါသည်။
ရိုးရာ အစားအစာနှင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုကို ရပ်ကွက် ဘုရားပွဲတိုင်း အစဉ်အလာမပျက် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကုလားပဲနှင့်ချက်သော မုန့်ဟင်းခါး၊ မုန့်ကျွဲသည်း၊ မုန့်ဖြူ၊ မုန့်နီ၊ ပဲကပ်ကြော် တို့ဖြင့် ဘုရားပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်တို့အား ဖိတ်ခေါ် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း သာမက အခြား ရပ်ကွက်များတွင် ရှိသော မိတ်ဆွေ၊ သင်္ဂဟနှင့် သက်ကြီးဝါကြီးများထံလည်း ပေးပို့ကြသည်။
ဘုရားတစ်ဆူနှင့် တစ်ဆူ၊ ရပ်ကွက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပပုံချင်း မတူသော်လည်း၊ ၀ါယမ စိုက်ထုတ်မှုခြင်း တူညီကြ၏။ပုဂံဘုရားပွဲတော်များထဲတွင် အစောဆုံး စတင်ပြီး အထင်ရှားဆုံး ဘုရားပွဲမှာ လောကနန္ဒာ ဘုရားပွဲတော် ဖြစ်သည်။ လောကနန္ဒာဘုရားသည် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို စတင် တည်ထောင်သူ ပုဂံပြည့်ရှင်ဘုရင် အနော်ရထာ၏ ကောင်းမှု ဖြစ်သည်။ ခေတ်ကာလအားဖြင့် အေဒီ(၁၁)ရာစုပင် ဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ် ဘုရင် ဆက်သသော ဗုဒ္ဓစွယ်တော်မြတ်ကို သီရိပစ္စယာအရပ် ဆိပ်ကမ်းမှ ပင့်ဆောင်၍ လောကနန္ဒာဘုရား တည်ကာ ဌာပနာ ထားသည်။ ပြည်တွင်း ဘုရားဖူး ခရီးသွားတို့ အဖို့ စွယ်တော်လေးဆူတွင် ပါဝင်သော ဘုရားဆိုလျှင် ပို၍ အမှတ်ရ လွယ်လိမ့်မည်။
လောကနန္ဒာ ဘုရားပွဲတော်ကို ၀ါခေါင်လဆန်း (၇/၈)ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပသည်။ ၀ါခေါင်လဆန်း ၈ ရက်နေ့ မနက်တွင် ဒေသခံများ သာမက၊ အနီးဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ပဲစိုက်၊ နှမ်းစိုက် တောင်သူများ၊ ထန်းတောင်သူများ၊ ဧရာဝတီမြစ်ရိုး တစ်လျှောက်တွင် လောကနန္ဒာ ဘုရားကို နေ့စဉ် ဦးခိုက်ကာ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ရှာဖွေ စားသောက်ကြသူများသည် ဘုရားရင်ပြင်တော်သို့ ခါတော်မီ အရောက်လာကြသည်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးမှ ရရှိသော ပဲ၊ နှမ်း၊ ကြက်သွန်နှင့် သပိတ်လုံး လာရောက် ကပ်လှူကြသည်။
ဘုရားခြေတော်ရင်း၊ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း၌လည်း ရေလုပ်သားကြီးများက ''ညီညာအပြိုင်၊ ရိုးသံတိုင်လျက်၊ စွဲကိုင်အညီ၊ တက်ကိုချီ၍'' ဆိုသကဲ့သို့ လောင်းလှေများကို တက်ညီလက်ညီ အလှပြ လှော်ခတ်ကြသည်။ ပွဲတော်ကျင်းပစဉ် အတွင်း ညစဉ် တရားပွဲ၊ ကြည့်ချင်ပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲများ၊ ရိုးရာ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဈေးသည်များ၊ ချား၊ ရဟတ်များဖြင့် အထူး စည်ကားလှ၏။
၀ါခေါင်လပြည့်နေ့တွင် မြစေတီ ဘုရားပွဲတော်ကို ကျင်းပသည်။ မြစေတီ ဘုရားပွဲတော်နှင့် မနုဟာ ဘုရားပွဲတော်များကို မြင်းကပါ ကျေးရွာကပင် ကျင်းပသော်လည်း မြို့မ ရပ်ကွက်သည် မြစေတီ ဘုရားပွဲကို တာဝန်ယူ၍
တော်သလင်းလပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပသော မနူဟာ ဘုရားပွဲတော်ကို ရွှေခြံ၊ ရွှေလယ်၊ စိန်ကုန်း ရပ်ကွက်များက တာဝန်ယူ ကျင်းပကြသည်။ မြစေတီ ဘုရားကို ကျန်စစ်သား၏ သားတော် ရာဇကုမာရ် တည်ထားကောင်းမှုပြု၍၊ မနူဟာဘုရားကိုမူ အနော်ရထာမင်း လက်ထက် သထုံပြည့်ရှင်ဘုရင် မနူဟာ ကောင်းမှု ပြုသည်ဟု မှတ်တမ်းများ ရှိသည်။
ပုဂံဘုရားပွဲတော်များကို အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ယခုထက်ပို၍ စနစ်ကျသော၊ ရိုးရာဓလေ့စရိုက် ယဉ်ကျေးမှုကို ပီပြင်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်သော ပွဲတော်များ ဖြစ်လာစေရန် . .
''ဘုရားပွဲတော် နှစ်ခုလုံး တူညီတဲ့ အချက်တွေကတော့ ရပ်ကွက် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ယွန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး အရုပ်အပြိုင် ချိုးကြတယ်။ အဖိတ်နေ့တွေမှာ အရုပ်သွင်းပွဲတွေကို
အပြိုင်ကပြီး သွင်းကြတယ်။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ကြတယ်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အရုပ်တွေက ပိုများများလာတယ်။ ကောက်ညှင်းဆန် ဖရုံသီးတို့နဲ့ စီမံထားတဲ့ ရိုးရာငါးချဉ် တည်ခင်းတာလည်း အစဉ်အလာမပျက်ပါပဲ''
လပြည့်နေ့များတွင်မူ သုံးလောကထွတ်ထား သဗ္ဗညုဘုရားအား ရည်မှန်း၍ အလှူအတန်း ပြုကြသည်။ သပိတ်လုံး၊ ဆွမ်းလုံးများ လောင်းလှူကြသည်။ ရပ်ကွက်အလိုက် ဘုရားထံ ရွှေဘိုး၊ ငွေဘိုး သွင်းလှူကြသည်။ မနူဟာ ဘုရားပွဲတော်တွင် ဆွမ်းဆန် စိမ်း ၁၇ တင်း ဆံ့သော သပိတ်တော်ကြီးအတွင်း ဆွမ်းများထည့်၍ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းသည်။ သပိတ်တော် အတွင်း ဆွမ်းအပြည့် လှူဒါန်းပါက အစားအစာ ငတ်မွတ်ရှားပါးခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေသည်ဟု အယူ ရှိကြသည်။ ပြီးလျှင်ရပ်နီး၊ ရပ်ဝေးမှ လာကြသော ဧည့်ပရိသတ် အပေါင်းအား ကျွေးမွေး ဧည့်ခံသည်။ ကျေးငှက်တိရစ္ဆာန်များအား စွန့်ကြဲ ကျွေးမွေးကြသည်။
''မြစေတီ ဘုရားပွဲတော်နဲ့ တန့်ကြည်တောင် စွယ်တော် ဘုရားပွဲက ကျင်းပချိန် အတူတူပဲ။ တန့်ကြည့်တောင်ဘုရားက ဧရာဝတီမြစ် တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ဆိုတော့ အဖိတ်နေ့ ညနေမှာ စက်လှေတွေနဲ့ ကူးကြတယ်။ ညဘက် ဆိုရင် တန့်ကြည်တောင်ဘုရား ရင်ပြင်မှာ ပွဲလာသူတွေများလို့ ခြေချစရာတောင် နေရာမရှိဘူး။ တစ်ညလုံးလည်း မအိပ်ကြဘူး။ ပုဂံဘက် ညရှု့ခင်းကလည်း အရမ်းလှတယ်။ ကောင်းကင်ကလည်း သာယာတာကြောင့် နက္ခတ်ကြည့်ပွဲလို့ တချို့က တင်စားကြတယ်။ ပျော်စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လပြည့်နေ့မနက် ရင်ပြင်တော်မှာ သပိတ်လုံး လောင်းလှူကြတယ်''
ထိုနည်းတူ မြင်းကပါ မနုဟာ ဘုရားပွဲနှင့် တုရွင်းတောင် စွယ်တော်ရှင်ဘုရားပွဲ ကျင်းပချိန်လည်း တစ်ချိန်တည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားပွဲတော်များတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်ဆုံး နေ့များသည် အဖိတ်၊ ဥပုသ်နေ့များပင် ဖြစ်သည်။
ပုဂံဘုရားပွဲတော်များတွင် ရပ်ကွက်အလိုက် ပွဲတော်များကိုလည်း အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပကြသည်။ ပျော်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲများပါသည်။ ပွဲတော်ချိန်ခါတွင် ရပ်ကွက် အလိုက်၊ အိမ်နီးချင်း အလိုက် အပြိုင်အဆိုင် ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းကြသည်။ ကျွေးမွေးကြသည်။
''အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံတာ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် အချိန်လေးဆယ်ကျော် ကုန်တယ်''ဘုရားပွဲတော်အတွင်း ကုန်ကျသည်များကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောလေ့ ရှိကြသည်။ အကျဉ်းချုံးဆောင်သော မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမျှ ကုန်ကျသည်ဟု သိရသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း ကျင်းပသော ဘုရားပွဲများသည် ညောင်ဦးဘက်တွင် ရှိသကဲ့သို့၊ ပုဂံဘက်တွင်လည်း ရှိသည်၊ ညောင်ဦးတွင် သီရိမင်္ဂလာဘုရားပွဲသည် အစည်ကားဆုံးသော ရပ်ကွက် ပွဲတော်များတွင် ပါဝင်ပြီး၊ ချမ်းသာကြီး ဆုံကုန်းရပ်ရှိ ရွှေယုန်မင်း ဘုရားပွဲသည် သစ်သီးမျိုးစုံ ကပ်လှူသောပွဲ အဖြစ် ထင်ရှားသည်၊၀ါခေါင်လတွင် ကျင်းပကြသည်။
''ပုဂံမြို့ဟောင်းကနေ မြို့သစ်ကို ရွှေ့လိုက်ကြရတော့ ရပ်ကွက်အလိုက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘုရားပွဲလေးတွေ အလေ့အထ နည်းသွားတာလည်း ရှိတယ်''
၀ါဆိုလပြည့်ကျော်မှ စတင်၍ အတွင်း အာနန္ဒာ၊ ရှင်ပင်ပွင့်လင်း၊ မဟာဗောဓိ။ ဂူသုံးလုံး၊ မင်းနန်သူ၊ ဆုတောင်းပြည့်၊ သံပျင်စွာ၊ သဉ်လည်ဂူ၊ ရွှေဂူလေး၊ သက်တော်ရ၊ ရွှေတောင်ဦး စသည့် ဘုရားပွဲများကို ရပ်ကွက်အလိုက်
ကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် နဂါးရုံဘုရားနှင့် ကန်တော့ပလ္လင် ဘုရားပွဲတော်များကိုလည်း သီတင်းကျွတ်လတွင် ကျင်းပကြသည်ဟု သိရသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားပွဲတော် တစ်ခုမှာ သီတင်းကျွတ် လဆန်း ၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော သင်ပုတ်ကြီးတင်ပွဲ ဖြစ်သည်။ သင်ပုတ်ပလ္လင်ပွဲ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ရွှေစည်းခုံဘုရား၏ အရိပ် အာဝါသအတွင်း၊ ၀တ္တကမြေ အတွင်း တောင်သူလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသူ၊ ကုန်စည် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားကြသူများသည် ထိုနေ့တွင် ဘုရားခြေတော်ရင်း လာရောက်ကာ အလှူဒါန ပြုကြသည်။ အချင်းနှစ်ပေခန့် ရှိသော ပေါက်ပေါက်ဆုပ်၊ ဂျုံဖြင့် ပြုလုပ်သော မြင့်မိုရ်တောင်၊ ဟင်္သာရုပ်၊ လိပ်ရုပ်များသည် ထူးခြား၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။ တောင်သူလုပ်ငန်း၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်ရန် ဆန္ဒပြုကြသည်။ သင်ပုတ်ကြီး တင်ပွဲနေ့တွင် ပလ္လင်ဆေးမိုး ရွာသည်ဟု တောင်သူတို့ အစွဲရှိကြသည်။
တောင်သူလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန်၊ ထွန်တုံးပိတ်ချိန်များတွင် ကျင်းပသော ဘုရားပွဲတော်များသည် ပွဲရက် အရှည်ဆုံးနှင့် အစည်ကားဆုံး ပွဲတော်များ ဖြစ်သည်။ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားပွဲတော်သည် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျင်းပပြီး ပွဲတော်ရက် ရှည်လျားသည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ(၁၂)ပွဲ ဈေးသည်များ လာရောက်ကာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း တစ်ထောင်ဝန်းကျင် ရှိသည်။ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ တောင်သူလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း၊ ကိရိယာများ၊ အ၀တ်အထည်၊ အစားအစာ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ မျိုးစုံ လာရောက် ရောင်းချသည်။ ခြင်းပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲ၊ အငြိမ့်ပွဲ စုံလှသည်။ လပြည့်နေ့ ရွှေစည်းခုံဘုရား ရင်ပြင်တွင် ကျင်းပသော သံဃာတော်များ သပိတ်လုံး ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲမှာ ပြည်ပ ခရီးသွားများကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးပွဲပင် ဖြစ်သည်။
''နိုင်ငံခြားသား အရမ်း သဘောကျကြတယ်။ ပွဲစကနေ ပွဲဆုံးသည် အထိ စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ ထိုင်းတို့၊ ဗီယက်နမ်တို့လည်း သဘောကျပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ၀င်လှူဒါန်းလေ့ ရှိတယ်''
အလိုတော်ပြည့် ဘုရားပွဲသည် နတ်တော်လတွင် ကျင်းပသည်။ လပြည့်နေ့ ဆုတောင်းပွဲတွင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများ တကူးတက လာရောက်သည်။
ပြာသိုပွဲခေါ် အာနန္ဒာဘုရား ပွဲတော်ကြီးကို ပုဂံတွင် ရက်အကြာဆုံး ကျင်းပသည်။ လာရောက် ခင်းကျင်းသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဆိုင်ခန်းများမှာ ထောင်ချီသည်။ ထွန်တုံးပိတ်ချိန်မို့ တောင်သူများ မိသားစု အလိုက် ရွာကိုစွန့်ခွာ၍ ပွဲတော်အတွင်း လနှင့်ချီ၍ လာရောက် အခြေချကြသည်။ လှည်းတပ်လှည်းဝိုင်းကြီးများဖြင့် အာနန္ဒာဘုရား အနီးဝန်းကျင် စခန်းချ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးလက် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့စရိုက်၊ စိတ်နေ သဘာဝ၊ ရောင့်ရဲတက်မှု၊ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒါန်းလိုမှု၊ အပျော်အပါး ခုံမင်မှု တို့ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ပြာသိုလပြည့်နေ့တွင်မူ အာနန္ဒာ ဘုရား ရင်ပြင်၌ သပိတ်လုံး လောင်းလှူပွဲ ကျင်းပသည်။ ဆောင်းနံနက်ခင်း၏ အာရုဏ်ဦး နေခြည်အောက်ဝယ် လှူဒါန်းပွဲ အတွက် လှုပ်ရှား ပြင်ဆင်နေကြပုံမှာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်း လှသည်။ ဒေသခံများ၊ တောင်သူများ၊ (၁၂)ပွဲ ဈေးသည်များဖြင့် လှူဒါန်းပွဲသည် စည်ကားလှသည်။
လှူဒါန်းပွဲ ပြီးမြောက်သည်နှင့် ပွဲဈေးခင်း အတွင်း လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်၊ အ၀တ်အထည်များ၊ တောင်သူလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စားစရာများ၊ ကလေးများ အတွက် ကစားစရာများ ၀ယ်ခြမ်းကာ မိမိကျေးရွာ
အသီးသီးသို့ လှည်းတန်းကြီးများဖြင့် စေတီပုထိုးများကြား လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်ကြလေသည်။ ပုဂံပွဲတော်များကား များပြားလှ၏။ တောင်ဇင်း၊ ကွမ်းဖလားနှင့် ပုလင်းရွာ ဘုရားပွဲများကဲ့သို့ အစဉ်အလာကြီးသော
ပုဂံ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ အတွင်းရှိ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူဘုရားများ၏ သမိုင်းပုံရိပ်များသည် ကြီးမားလှ၏။ ထို့အတူ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူဘုရားများအား ရည်စူး၍ ကျင်းပကြသော ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်များသည်လည်း သမိုင်း အစဉ်အလာ ကြီးမားလှ၏။ ပုဂံ၌ ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပချိန်များသည် ဤဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အဓိက ရေသောက်မြစ်သဖွယ် ဖြစ်သော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရာသီချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
ပုဂံ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူဘုရားများအား ပြတိုက်ကြီးသဖွယ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လေ့လာနိုင်သကဲ့သို့ အစဉ်အလာ ကြီးမားသော ဘုရားပွဲတော်များတွင်လည်း မြန်မာတို့၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက် သဘာဝ၊ ဂီတအနုပညာ၊ ရိုးရာကစားနည်းများ၊ အစားအသောက်များ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံများကို တစ်ပါတည်း လေ့လာနိုင်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ ပုဂံဘုရားပွဲတော်များကို အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် ယခုထက်ပို၍ စနစ်ကျသော၊ ရိုးရာ ဓလေ့စရိုက် ယဉ်ကျေးမှုကို ပီပြင်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်သော ပွဲတော်များ ဖြစ်လာစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွား
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမည် ဆိုလျှင်ဖြင့် ဒေသ အတွက်၊ နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးများစွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
8/23/2011 09:27:00 PM
အလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၆၆၈
8/23/2011 09:06:00 PM
ဒေါ်လာဈေးဆက်တိုက်ကျ၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲလာ
အစိုးရက ပြည်ပပို့ကုန် တိုးမြှင့်ရေးကို အားပေးသည့် အနေဖြင့် ရေထွက်ပစ္စည်း အပါအ၀င် ကုန်ပစ္စည်း ၇ မျိုးအပေါ် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကောက်ခံခြင်း ၆ လ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ (Export Earning) တန်ဖိုး လွန်စွာကျဆင်း လာသည့်အတွက်
ပြည်ပသို့ ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့နေသည့် ကုမ္ပဏီများ အရှုံးပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် ဗဟိုငါးဈေးမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - AP)
သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း လိုအပ်သည့် တရားဝင် ငွေကြေးဖြစ်ပြီး
အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိရာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းနေသည့်အတွက် ပို့ကုန်ဝင်ငွေလည်း ကျဆင်း နေခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတ
ဦးသိန်းစိန်က သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အသင်း အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လက်ရှိ သတ်မှတ် ထားသည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး တရှိန်ထိုး တက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ပြီးခဲ့သည့်
ဇွန်လအတွင်း အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကျပ် ၇၈၀၊ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ ၈၀၀ ကျပ် ဈေး ရှိနေရာမှာ ယနေ့တွင် တဒေါ်လာလျှင် ၆၈၄ ကျပ် ဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်ဝင်ငွေ ဈေးနှုန်းမှာ ၇၁၇ ကျပ်အထိ ဖြစ်သွားသည်။ထိုသို့ ကျဆင်းနေမှုကြောင့် ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အရှုံးပေါ်နေခြင်းကို ကာမိစေရန် အစိုးရက သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဆန်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ရော်ဘာ၊ ရေချိုရေငန်ထွက် ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများ ပြည်ပ တင်ပို့မှုအပေါ် ၆ လ ကုန်သွယ်ခွန် စည်းကြပ်ခြင်း မပြုဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ထိုသို့ အစိုးရက ကုန်သွယ်ခွန်များ လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ရပ်တခုဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း ကျဆင်းနေသည့်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အရှုံးပေါ်နေသည်ဟု ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်မှ လုပ်ငန်းရှင် ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောသည်။“အခွန်လျှော့တာ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကြိုဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် လတ်တလောမှာ ငွေလဲနှုန်းက တဒေါ်လာ ကျပ် ၇၀၀ အောက် ရောက်နေတော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံထဲကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပဲ့ပါသွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ပို့ကုန်ဝင်ငွေနှင့် ကျပ်ငွေလဲလှယ်မှု နှုန်းထား ကျဆင်းနေသော်လည်း ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် ကုန်သွယ်မှု စာချုပ်များ အရ ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းပစ်၍ မရနိုင်ကြောင်း၊ အရှုံးဖြင့်သာ ဆက်လက် တင်ပို့နေရကြောင်း၊ ရေရှည်တွင် ရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း ဦးလှမောင်ရွှေက ဆိုသည်။အစိုးရအနေဖြင့် ငွေကြေးလဲလှယ်မှု ဈေးကွက် တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ထံ နည်းပညာ အကူအညီပေးရန် တောင်းခံထားပြီး IMFမှ ပညာရှင်များက လာမည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည်ဟု သိရသည်။သမ္မတ၏ စီးပွားရေး အကြံပေးပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့်ကလည်း ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး လဲလှယ်နှုန်း နှင့် ပတ်သက်၍ စာတမ်းတစောင် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ထိုစာတမ်းတွင်
ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မာလားခြင်းသည် မလိုလားအပ်သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အချိန်ကိုက် ဖိဖိစီးစီး ဖြေရှင်းရန်လိုကြောင်း၊ ၁၉၉၇- ၁၉၉၈ ခုနှစ် အာရှဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းဖြစ်စဉ်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသကဲ့သို့ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာများ အဖြစ် အသွင် ကူးပြောင်းသွားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ် တတ်ကြောင်း ထောက်ပြထားသည်။ထို့အပြင်
မြန်မာကျပ်ငွေဈေး မြင့်တက်နေခြင်းမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မျက်ရောင်းချခြင်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တို့၌ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ၀င်လာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတိုးနှုန်း မြင့်မားနေခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူကာ မြေယာနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ၀ယ်ယူရန် ၀င်လာခြင်း၊ မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက် များ ရရန် မလွယ်ကူသည့်အတွက် မသေချာမရေရာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဈေးကစားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာဦးမြင့်က ၎င်းစာတမ်းတွင် ထောက်ပြသည်။ထိုကြောင့် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းများအတွင်း ကောလာဟလများ၊ မမှန်ကန်သော သတင်းများကို တမင်ဖြန့်ဖြူး ခြင်းများ မဖြစ်စေရန်
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များကကဲ့သို့ ငွေဖောင်းပွနှုန်း၊ နိုင်ငံခြား သီးသန့်ရန်ပုံငွေ၊ အမျိုးသား ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း၊ ငွေကြေးပမာဏ၊ ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် တိုးတက်မှုနှုန်း (GDP)၊ အိမ်ထောင်စု ၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စစ်တမ်း၊ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ စသည့် အဓိကနိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရေး စာရင်းအင်း အချက် အလက်များကို တရားဝင် ပုံမှန် ထုတ်ဝေသင့်ကြောင်း စာတမ်း၌ အကြံပြုထားသည်။သို့သော် လက်ရှိ ငွေကြေးဈေးကွက် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းထိခိုက်နေသည့် အခြေအနေကို အစိုးရအနေဖြင့် မည်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုတွင် ရေနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကို သာမက ဆန်စပါး တင်ပို့မှုလုပ်ငန်းကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်ဟု သိရသည်။ယနေ့ ဆန်ဈေးကွက်တွင် အကျိုးအကြေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည့် ဧည့်မထဆန်ကို ပြည်ပသို့ သင်္ဘော ၂ စီးစာ တင်ပို့ရန် ရှိသော် လည်း ငွေကြေးဈေးကွက် ကျဆင်းနေသည့်အတွက် ပြည်ပဆန်တင်ပို့သူများက ဆန်ဈေးကို လျှော့ချကာ ၀ယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း၊ ဘုရင်နောင် ဆန်ဈေးကွက်တွင် ဧည့်မထဆန် ရောင်းဝယ်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားကြောင်း ဘုရင်နောင်ပွဲရုံတန်းမှ ဆန်ကုန် သည်တဦးက ဆိုသည်။“ဒီနေ့ဈေးက တော်တော်လေးကျသွားတော့ ဈေးကွက်ထဲ နယ်ကဆန်က လောလောဆယ် ၀င်လာမှာ မဟုတ်သေးဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ပြည်ပတင်ပို့သည့်
အကျိုးအကြေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည့် ဧည့်မထဆန်မှာ ပြီးခဲ့သည်ရက်က တတင်းခွဲ တအိတ်လျှင် ၁၃၃၀၀ ကျပ်ခန့် ရှိရာမှ ယနေ့တွင် ၁၂၇၀၀ ကျပ်သို့ ကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါကုန်သည်က ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်းလှိုင်ကမူ အစိုးရက ကုန်သွယ်ခွန် ပေးဆောင်ခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုလိုက်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ တနည်းတလမ်း သက်သာခွင့်ရရှိကြောင်း၊ ယခုကာလသည် အပြောင်းအလဲကာလ တခုဖြစ်သည့်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ယာယီ ထိခိုက်မှုများ ရှိလာနိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ် လာမည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
8/23/2011 08:57:00 PM
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး တနှစ်စာအတွက် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်လိုအပ်ချက်၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သာ
ရရှိခြင်းကြောင့် အစိုးရဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်း အင်္ဂါနေ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အမတ်တဦး၏ အမေးကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်က ပြောကြား သွားသည်။ဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေသက်ခင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ တနှစ်အတွက် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် လိုအပ်ငွေမှာ ကျပ်ငွေ သန်း ၈,ဝဝဝ ဖြစ်ကာ၊ ဌာနမှ ရငွေမှာ သန်း ၃,၅ဝဝ သာရရှိသည်ဟု ပြောကြောင်း လွှတ်တော်တက် အမတ်များက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ရငွေမှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်ငွေ၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာ ရရှိနေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၁ မှ ကြံ့ဖွံ့အမတ် ဦးတင်ယု၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဆေးရုံများတွင်ဆေးဝါး လုံလောက်စွာ ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေကိုမေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားသွားခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုနှင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည်ဟုလည်း ဝန်ခံသွားခဲ့သည်။လူထုအတွက်
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ရှမ်းအမျိုးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်အုန်းက ဝင်ငွေနည်း
ပြည်သူများ အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့် အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့သေးသော်လည်း ယခင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်က စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး စနစ် ကျင့်သုံးနေသည်ဆိုကာ အဆိုကို ပယ်ချခဲ့သည်။အင်္ဂါနေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်း
ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ပေးရန် ရှိမရှိ မေးခွန်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဦးဆွေအောင်က မေးမြန်းရာ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းမှ သစ်တော ဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာမြအေးမှ “ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား နိုင်ငံတော် သမ္မတ
ကိုယ်စား သို့မဟုတ် ယင်းမှ တာဝန်ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်က ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေမူကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးရန်” အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် သင့်မသင့်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘက်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အမတ်များမှ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း ၅ ခု၊ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်
ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း ၅ ခုတို့ကို မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြအေးက ဖြေကြားပြီး ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်မှ ဖြေကြားသွားသည်ဟု လွှတ်တော်တက်အမတ်များက ပြောသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်
အမတ် ဦးကြည်မြင့်မှလည်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစရိတ် ကျဆင်းစေရန်နှင့် ပို့ကုန် တိုးတက်စေပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မြင့်မားစေရန် ပို့ကုန်အခွန်များကို ဖယ်ရှားပေးရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအဆိုကို လွှတ်တော် တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သင့်မသင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။တိုးတက်မှုတခုအဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်များမှာ ပထမအကြိမ်ထက် ပိုမိုလာပြီး
အင်္ဂါနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းဝေးများမှာ ၂ နာရီခွဲကြာမြင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဂျေကွင်တားနားလည်းနေပြည်တော်ရောက်ရှိနေခိုက်ဖြစ်ကာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်တို့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သေးသည်။
လွှတ်တော်အမတ်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ
၁) ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထိခိုက်ခြင်း၊၂) အခြား ဘာသာ သာသနာကို ပုတ်ခတ် ပြောဆိုခြင်း၊၃) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေခြင်း၊၄) နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၅) နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးနှင့် လျို့ဝှက်ချက်ကို တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း ပေါက်ကြားစေခြင်း၊ ၆) ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဦး၏ အကျင့်စာရိတ္တ သို့မဟုတ် အပြုအမူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းခြင်း၊ ၇) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း စသည်တို့ကို သတ်မှတ်ထားသည်။
ယနေ့ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ် ကျော်ကြာမှ ပထမဆုံး ကြေညာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေ ရသုံးခန့်မှန်းငွေစာရင်း တင်သွင်းရာတွင် ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်း အတွက် ကျပ် ဘီလီယံပေါင်း ၂ ထောင်ကျော် လိုငွေပြနေကြောင်း သိရသည်။ ၂၄
နှစ် ကျော်ကြာမှ ပထမဆုံး ကြေညာသည့် အထွေထွေ ရသုံးခန့်မှန်းငွေစာရင်းကို ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
နှစ်စဉ်အလိုက် ကြေညာရသော ရသုံးမှန်းခြေစာရင်းအရ နိုင်ငံတော် တရပ်လုံး၏ ရငွေ စုစုပေါင်း ပမာဏမှာ ၅၇၈၁. ၇၃၈ ဘီလျံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း သုံးငွေ ပမာဏမှာ ၇၉၈၃.၁၈၈ ဘီလျံ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘတ်ဂျတ် (ရသုံးမှန်းခြေ) လိုငွေပြမှုသည် ၂၂၀၁. ၄၅၀ ဘီလျံ ဖြစ်နေသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၁ ကို ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်တိုးက ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လိုငွေပြမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြမှု မရှိပေ။ “နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းက
၆ ကျပ်နဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ ဖွင့်ထားလို့ အခုလို လိုငွေပြနေတာလို့ ပြောတယ်။ တိုင်း၊ ပြည်နယ် အားလုံး လိုငွေတွေပဲ ပြနေတယ်။ လိုငွေ မပြတာ တခုမှမရှိဘူး” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် တက်ရောက်ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောသည်။ တိုင်းပြည်
အသုံးစရိတ်များတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဌာနတို့အတွက် အသုံးစရိတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းအလွန် နည်းပါးပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် မည်၍ မည်မျှ သုံးစွဲကြောင်း တင်ပြသွားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံတော် အဖက်ဖက်က အသုံးစရိတ်ပြ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်တမ်း အရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ်သည် ကျပ်ငွေ ၁၃၁၈ ဘီလျံ ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ် နိုင်ငံတော်၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ကျပ် ၆၇၇၂ ဘီလျံကျော်ရှိရာ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀
ကျော် သုံးစွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ် စာရင်းအရပင် ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်မှာ ၄.၅၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၁.၃၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ လူမှုရေး၊ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးတို့အတွက် ၀. ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ သုံးစွဲကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ “နေ့လယ်ပိုင်း ၁ နာရီမှာ စတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ က ဦးတင်ယုက မေးမြန်းတယ်။ တိုင်း၊ ဒေသကြီးများနဲ့ ပြည်နယ်များရဲ့ ဆေးရုံများမှာ ဆေးဝါး မလုံလောက်စွာဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို မေးပါတယ်၊ အဲဒါကို ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က ရှင်းပါတယ်။ ဘတ်ဂျက် အခြေအနေအရ လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းပေါ့” ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦး
ဖြစ်သူ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ် အလွန် များပြားခဲ့ပြီး လက်နက် ခဲယမ်းများ၊
ရဟတ်ယာဉ်များ၊ တိုက်လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူခြင်း၊ အနုမြူစီမံကိန်းနှင့် နေပြည်တော် မြို့သစ် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း တို့ကြောင့် ယခုတက်လာသော အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ပမာဏကြီးမားသည့် နိုင်ငံတော် ရသုံးမှန်းခြေ( ဘတ်ဂျက်) လိုငွေပြနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူများက ထောက်ပြကြသည်။
8/23/2011 08:51:00 PM
ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက်အား KIO ပယ်ချ
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပဲပါတယ်။ ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါး ဘောင်အတွင်းမှာ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲကနေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများအနေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ မ ရှိ ဘူး။” ဟု KIO တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂) ဆလန်ကဘာ လာနန် ပြောသည်။သြဂုတ် (၁၈) ရက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၁) တွင် ပါရှိသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား တစ်ဖွဲ့ချင်း ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပဋ်ိက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်မည် မဟုတ်ဟု သူက ဆက်ဆိုသည်။“တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအလိုက်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာကို အရင် မဆလ ခေတ်မှာလည်း အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ န၀တ နဲ့လည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ နအဖ နဲ့လည်းလုပ်ခဲ့တာပဲ။” ဟုပြောဆိုသည်။ကချင်အမျိုးသားများ၏
ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ခဲ့သော KIO သည် တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရ၊ မဆလ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ) အစိုးရ၊ န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိပ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့) အစိုးရ၊ နအဖ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ) အစိုးရနှင့် တစ်ဖွဲ့ချင်း အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာ နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ထို့အတူ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် တိုင်းရင်းသားများကြား အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှု မ ရှိ သည်ကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်လွတ်လပ်ရေး ရသည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာသော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမည်ဆိုပါက KIO အနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ဘဲ ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့နေဖြင့်သာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသွားမည်ဟုဆိုကာ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင် ဦးဆောင်သော ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆလန်ကဘာ လာနန် ပြောသည်။ကချင်၊ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ လားဟူ၊ ပလောင်၊ ပအိုဝ့် ဌာနေ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များ ပါဝင်သည့် UNFC (United Nationalities Federal Council) အား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက သောင်းကျန်းသူများဟု သြဂုတ် (၁၂) နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
8/23/2011 08:46:00 PM
မြိုင်ကြီးငူဒေသရှိ ရွာ ၉ရွာကို BGF ပြောင်းရွှေ့ခိုင်း
သြဂုတ်လ ၂၂ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူဒေသရှိ ကျေးရွာ ၉ရွာအား နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) က မြိုင်ကြီးငူကျေးရွာသို့ ယခု လလယ်ပိုင်းက အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းသည်ဟု ဒီကေဘီအေအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်သည့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ မြိုင်ကြီးငူဒေသရှိ ထီးလာနဲ၊ တမိုယာ့၊ မာအဲ၊ ယော့ပို့ထာ့၊ ပူဆေ၊ သကွီးကလား၊ ထီးလော်သီထာ့၊ ဖွေးဖိုးကလား၊ မဲ့ပေါ်က လားကျေးရွာများအား နယ်ခြားစောင့်တပ် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့် စောဖားနွီး၊ စောထွန်းလှိုင်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်မှစ၍ ယခုအချိန်ထိ မြိုင်ကြီးငူကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခိုင်းသည်ဟု ဒီကေဘီအေအဖြစ် ပြန်လည်ရပ် တည်ခဲ့သည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဗိုလ်ဖားနွီးနဲ့ မောင်ထွန်းလှိုင် ပြောင်းခိုင်းတာလေ။ အခြေအနေက ရှုတ်ထွေးနေတော့ ရွာသားတွေလည်း ရွာမှာမနေရဲ ကြဘူး။ ရွာကိုလည်း မကြာခဏ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အပစ်ခံရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရွာသားတွေ ဘယ်နေရဲကြမလဲ၊ ပြောင်း
တာပေါ့။ တချို့ရွာသားတွေကတော့ ရွာမှာ ဆက်နေသေးတယ်။”ဟု ပြောသည်။
၎င်းရွာ ၉ရွာတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အိမ်ခြေ ၈၀၀ကျော်ရှိပြီး ရွာသူကြီးများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိ သည့် လယ်၊ မြေ၊ ခြံနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ ဒီကေဘီအေတပ်မှူးက ပြောသည်။
မြိုင်ကြီးငူကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ရွာသားများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲနှင့် ကြုံနေရသော ကြောင့် မိမိကျေးရွာအတွင်းသို့ ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ထိုဒေသ၌ လှုပ်ရှားနေသည့် ဒီကေဘီအေနှင့် ကေအဲန်အယ်လ်အေတပ်ဖွဲ့များက ၎င်းတို့လှုပ်ရှားရာနေရာမှ အနည်းငယ် နေရာဆုတ်ခွာလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ(၇)မှ တပ်မှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ အဲဒီမှာ မနေတော့ဘူး။ တပ်ဆုပ်လိုက်ပြီ၊ နို့မဟုတ်ရင် ရွာသားတွေရဲ့ လယ်တွေ၊ ကျွဲတွေ၊ နွားတွေ ၀င်စား လို့ ပျက်စီးကုန်မယ်။ အဲဒါကြောင့် တပ်ဆုတ်လိုက်တာပါ။”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းက နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ခွဲထွက် ဒီကေဘီအေတို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရာတွင် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များက အမြင့်နေရာများမှနေ၍ ၎င်းကျေးရွာများအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် လှမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရွာသားတချို့ လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့သလို ပိတ်ထားခဲ့ရသည့် စာသင်ကျောင်းများမှာလည်း ယနေ့အချိန်ထိ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံ ကေအိုင်စီက မေးမြန်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရပေ။
Photo-KTWG (စစ်ဘေးကြောင့် မဲ့သဝေါရွာသို့ ထွက်ပြေးလာသူ ရွာသားများ)
ထို့အပြင် ၎င်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ယော်ပို၊
တကွီကလား၊ ကမားထာ့၊ ပနွယ့်သာကလား စသည့်ကျေးရွာများမှ ရွာသူကြီး အပါအ၀င် ရွာသူရွာသား ၁၀၀ကျော် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ နယ်စပ်ဘက်ရှိ မဲ့သဝေါကျေးရွာသို့
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရာ ယနေ့အချိန်ထိ ကူညီမည့်သူ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိ ထီးသဒေါထာ့ကျေးနယ်မှ မဲ့လား၊ မဲဆိပ်စသည့်ကျေးရွာများကို တပ်မ(၁၁)လက်အောက်ခံ ခမရ (၂၁၄)တပ်ရင်းက သြဂုတ် ၂ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင် ၎င်းရွာများအား လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူ ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၅)က ပြောသည်။
8/23/2011 08:44:00 PM
ဒေါ်စု နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တွ့ဆုံမှူ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဦးတည်ဟု ချင်းခေါင်းဆောင်များပြော
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် အစိုရသစ်အနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး စတင်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ချင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ က ရှုမြင်ကြသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၁) ဒေါက်တာရွှေခါးက ‘‘ သမ္မတနဲ့ ဒေါ်စုတွေ့ဆုံမှုက ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ လို့မြင်တယ်၊ အရင်က နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ အစိုးရသစ်က သဘောထားပျော့ပြောင်းပြီးတော့ အမျိုးသားပြန် လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဘက်ကို ရှာနေတဲ့ပုံတော့ပေါ်တယ်’’ဟုပြောသည်။
ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦးသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ် တည်ဆောက်ရေး၊ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အတွက် မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင် တော် လှန်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်သည့်အချိန်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ၁ နာရီခန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အစိုးရသစ် တက်လာသည့်နောက်ပိုင်း ဦးသိန်းစိန် နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ချင်းအမျိုးသားပါတီမှအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆလိုင်း ကျဲအိုဘခ်ထောင်း ကယခုတွေ့ဆုံမှုမှတဆင့်သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတက်လှမ်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ပြောသည်။
‘‘ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေက နှစ်ပွင့် နဲ့တော့ ပြီးဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ဖို့တော့ လိုတယ်၊ အနှေးနဲ့အမြန် တိုင်းရင်းသားအရေးကို ထည့်တွက်ဖို့လိုပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်လာမှသာ သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒီဟာကို မလွှဲမရှောင်သာ ကျနော်တို့လုပ်ရမယ့်ဟာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဆလိုင်း ကျဲအိုဘခ်ထောင်က ဆိုသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ဇိုမီးအမျိူးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ၏ ဥက္ကဌ ဦးကျင့်ရှင်းထန်ကမူ သမ္မတ နှင့် ဒေါ်စုတွေ့ဆုံမှုအပေါ် အကောင်းဘက်မှ ရှုမြင်သော်လည်း အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်ပေါ်လာရန် နိုင်ငံရေး အရဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံ ထားရသူများကို အစိုးရအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
‘‘အမျိူးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ကြေညာပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရအဖမ်းခံထားရတဲ့သူအားလုံး ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပဲ’’ဟု သူက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(AAPP)၏ စာရင်းအရ သိရသည်။
8/23/2011 08:41:00 PM
မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် Vol.3, No.32
8/23/2011 12:25:00 PM
The Voice 7-36
8/23/2011 11:51:00 AM
အမြတ်ခွန်ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေ အပါအဝင် ဥပဒေကြမ်း ငါးခု ပြင်ဆင်ရန် အစိုးရသစ်က လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်း
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၂အစိုးရသစ်၏ ဘဏ0x081ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးလှထွန်းက အမြတ်ခွန်ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်း အပါအဝင် ဘဏ0x081ဍာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းငါးခု ပြင်ဆင်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တရားဝင် တင်ပြလိုက်သည်။စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ဦးလှထွန်းက ခေတ်မမီတော့သည့် ဥပဒေကြမ်းများကို ပြင်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် အမြတ်ခွန်ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းကို လည်းကောင်း၊ ယင်းနောက် တံဆိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို လည်းကောင်း၊ ယင်းနောက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်း၊ ဝင်ငွေခွန် ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်း၊ အစိုးရရုံးခွန် ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်း စုစုပေါင်း ငါးခုကို ပြင်ဆင်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တရားဝင် တင်သွင်းလိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ခံကြသည်။" ဥပဒေကြမ်းပြင်ဖို့ လွှတ်တော်က သဘောတူထားပြီးပြီ။ လာမည့် သောကြာနေ့ မတိုင်ခင် ဆွေးနွေးချင်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေက လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆီမှာ တရားဝင်တင်ပြ အကြောင်းကြား ဆွေးနွေးလို့ရမယ် " ဟု ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ဥပဒေကြမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် စိစစ်ဆွေးနွေးမှုများကို ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီက ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောကြားသည်။ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးကမူ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည့် ဥပဒေကြမ်းများကို တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကမူ ယနေ့ အစိုးရက ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ရုပ်သိမ်းရန် တင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်းများသည် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သော ဥပဒေကြမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် ကန့်ကွက်ရန်မရှိဘဲ အထူး ကောင်းမွန်သဖြင့် ထောက်ခံပါကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရန် ဆုတောင်းမေတ0x081တာ ပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ ၂၀၁ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲများကို အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြီးစီးပြီးနောက် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ခေါ်ယူကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤလွှတ်တော်ကြီးက ကျွန်တော့်အား နိုင်ငံတော်သမ0x081မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဆင့်အဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင် ထားရှိပြီး စနစ်တကျ လည်ပတ်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ် အလားတူ ဒီလွှတ်တော်ကြီးကပဲ သဘောတူ အတည်ပြုပေးလိုက်သည့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ0x081ဍိုင်ဟာလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပေဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များအမှအပ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ရေး၊ အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံချေပပိုင်ခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့် ရှိရေးစတဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အခြေခံမူများနဲ့အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ ထမ်းရွက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ရဲ့ အဓိက တာဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေးနှင့် အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရေးတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် အောင်အောင်မြင်မြင် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးအတွက် Capacity Building ကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုလည်း ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် နိုင်ငံတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ မဏ0x081ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်ရဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုများနဲ့အညီ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျကျ အသက်ဝင် ပုံပေါ်လာအောင် ပုံဖော်တည်ဆောက် ထမ်းရွက်ကြနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ်တစ်ရပ်ကို ချောမွေ့ညင်သာ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အချုပ်အခြာ အာဏာကြီး သုံးရပ်ကို စနစ်တကျ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကိုယ်စား ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဦးစွာ ပဏာမ ပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်နှင့်တစ်ကွ အစိုးရအဆင့်ဆင့်၊ နာယကြီးနှင့်တစ်ကွ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တို့ဟာ ပြည်ထောင်စု သမ0x081မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ0x081စာစောင့်သိ ရိုသေပြီး ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထာဝစဉ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု ကတိသစ0x081စာပြုထားကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အပ်နှင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ0x081မတရဲ့ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက် မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးပြီး အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးကို ဖွင့်လှစ်ကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာကို ထုတ်ဖော်ပြသ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ0x081ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ခိုင်မာလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေး အခြေအနေကောင်းတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကုန်သွယ်ရေးနယ်မြေတွေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အင်အားစုများကိုလည်း သဘောထားအမြင် ကွဲလွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ ပဋိပက0x081ခတွေ လျော့ပါးအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တွေ ထွန်းကားပြန့်ပွားလာအောင် စတင်ကူးပြောင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ တွဲလျက် တည်ရှိနေတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုဆိုတဲ့ Democratic Spirit ကိုလည်း ခိုင်မာလာအောင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ထူထောင်တည်ဆောက် သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Democratic Pratices ဖော်ဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း သိသာမြင်သာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ၊ ရလာဒ်ကောင်းတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်စေဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အာဏာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -ပြည်သူအများ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး (Good Governance)၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် (Democratic Pratice) များ ထွန်းကားရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု လျှော့ချရေး၊ သဟဇာတဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း ဤလွှတ်တော်အား ကတိပြုပြောကြားထားချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထားရပါ့မယ်။ ပြည်သူလူထု စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ပြည်သူလူထု စိတ်ချမ်းသာမှုကို ထမ်းဆောင်ကြတဲ့၊ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစား အားထားမှုကို ခံယူထိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် ပညာပေးခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်ကိုပါ ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရာမှာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ၊ ကြိုးနီစနစ်တွေ ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားသူတွေ၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှု ကင်းမဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများကိုလည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ချုပ်ရေး အာဏာဟာ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တည်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ0x081ဍာန်များကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပေဒနှင့်အညီ အသက်ဝင် အကောင်အထည် ပေါ်လာစေရန်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ0x081ဍာန်သစ်ကို စတင်ဖော်ဆောင်ရချိန် ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများရဲ့ Institutional Building နှင့် Capacity Building တို့ဟာလည်း အရှိန်အဟုန် ရရှိလာတာနဲ့အမျှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များရဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပုံဖော်တည်ဆောက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှသည် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သော အုပ်ချုပ်ရေး မဏ0x081ဍိုင်ကြီးများဟာလည်း ဥပဒေများ စနစ်တကျ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ပိုမို ထိရောက်မှန်ကန်သော၊ ပြည်သူလူထု ပါဝင်မှုကို ရှေးရှုဦးတည်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ0x081ဍာန်များ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်အတွက် ဤလွှတ်တော်သို့ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်များနဲ့အညီ ငွေကြးမူဝါဒ၊ ဘဏ0x081ဍာရေးမူဝါဒ၊ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ် လေ့လာပြီး စီးပွားရေးကဏ0x081ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူများ၊ တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားများ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ရမည် ဟူသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ0x081ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပြဋ0x081ဌာန်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ခေတ်၊ စနစ်နှင့် မလျောညီတော့တဲ့ အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများရဲ့ ပင်စင်လစာ၊ နိုင်ငံရေးပင်စင် လစားမျာကိုလည်း ပြဋ0x081ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများနဲ့အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ0x081ဂ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့အညီ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှုန်းထား (၁၆ %) အထိ လျှော့ချနိုင်အောင် ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ လက်ရှိအချိန် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှု နှုန်းထား အတက်အကျ မတည်ငြိမ်မှုများ၊ ကမ0x081ဘာ့စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွင် မသေချာမရေရာ ဖြစ်ပေါ်မှု အနေအထားများ၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှု အန0x081တရာယ် ကျရောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက် စပါးစိုက် တောင်သူလယ်သမားများ အနေဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ " နိုင်ငံတော်သည် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သည့် ကောက်ပဲ သီးနှံများ သင့်တင့်မျှတသည့် တန်ဖိုးရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည် " ဟူသော ပြဋ0x081ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားများ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် မကာမိသည့်အပြင် ဈေးနှိမ်ခံရခြင်းစတဲ့ အခက်အခဲများမှ လွတ်ကင်းစေရန်လည်း ပုဂ0x081ဂလိကကဏ0x081ဍနဲ့ ပူပေါင်းပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်သူလယ်သမားများ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားသည့် လယ်မြေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စိတ်ချလက်ချဖြင့် သားစဉ်မြေးဆက်တိုင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်အောင် အစီအမံများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်များရဲ့ မတည်ငြိမ်မှု၊ ကမာ0x081ဘ့စီးပွားရေး အခြေအနေ ယိမ်းယိုင်နေမှု စတဲ့ External Factor များကြောင့်လည်း ပြည်တွင်း စီးပွားရေးအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီလို ဆက်နွယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများအရ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အကျပ်အတည်းအချို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုမြန်ဆန် သွက်လက်လာအောင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်တွေကို အများဆုံး နှစ်ပတ်အတွင်း ရရှိအောင်၊ ကုမ0x081ပဏီထူထောင်ခွင့် လိုင်စင်တွေကို အများဆုံး နှစ်လအတွင်း ရရှိအောင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ အများဆုံး (၂၁) ရက်အတွင်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလို ပို့ကုန်အပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အခွန်နှုန်းထားကိုလည်း (၇) ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံစေတဲ့ စနစ်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ပေးခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အချို့မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်တာကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ပို့ကုန်တွေအပေါ် ကောက်ခံနေတဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကိုလည်း (၆) လသက်တမ်းနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးအတွက် အဓိက အသက်သွေးကြော ဖြစ်တဲ့ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် လုပ်ငန်းပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေအောင်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အကြောင်းပြုပြီး မသမာတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒတွေကို လေးစားလိုက်နာကြဖို့၊ စည်းကမ်းရှိဖို့၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ရှေ့တန်းမတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုနှုန်းထား အပါအဝင် စီးပွားရေးမူဝါဒများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ခေတ်၊ စနစ်နှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြဋ0x081ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အလွှာစုံ တက်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အကြံပြုချက်၊ ရလာဒ်များကို စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဘဏ0x081ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ် လူမှုစီးပွားဘဝတွေကို ရေတို၊ ရေရှည် ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေဖို့ သတိရှိရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများ၊ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေများနှင့်အညီ မျက်ခြေမပြတ် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး တစ်မျိုးသားလုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အာဏာနဲ့အညီ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ0x081ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး၊ လူတိုင်းလူတိုင်း တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးများ ရရှိရေးတို့ကို အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်ပေးပြီး မလိုအပ်သော အပိုကုန်ကျစရိတ် Transactional Cost များ လျော့နည်းကျဆင်းရေး၊ ကြိုးနီစနစ်များ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး ယန0x081တရားများ အသက်ဝင် ရှင်သန်ခိုင်မာလာရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အခြေခံတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးတို့ကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးမဏ0x081ဍိုင်မှာ Key Driver များဖြစ်ကြတဲ့ ပုဂ0x081ဂလိကကဏ0x081ဍ ဦးဆောင်အသင်း အဖွဲ့များနဲ့လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အပိုင်းနဲ့ ပုဂ0x081ဂလိကအပိုင်း အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စီးပွားရေး အခက်အခဲများကို စုပေါင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပြီး Public Private Partnership လမ်းကြောင်းကို ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာအောင် ပုံဖော် တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ0x081ဂလိကကဏ0x081ဍကလည်း မိမိတို့အပိုင်းက စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များ တိုးမြှင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးဖော်ဆောင် ပေးနိုင်အောင်၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသား ကုန်ထုတ်စွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားလာအောင်၊ နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ0x081ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဝန်းကျင်မှာ အရည်အသွေးနဲ့ စံချိန်စံညွှန်း မြင့်မားတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်နဲ့အတူ လက်တွဲပူးပေါင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ် သွားကြဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများကို အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ0x081ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရေး၊ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများကိုလည်း ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ပြဋ0x081ဌာန်းနိုင်ရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ဥပဒေများ ပြဋ0x081ဌာန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ စတုတ0x081ထမဏ0x081ဍိုင်ဖြစ်သည့် သတင်းမီဒီယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ0x081ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပေဒေများကို နိုင်ငံတော်၏ ပကတိ အခြေအနေမှန်နှင့်အညီ ပြဋ0x081ဌာန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုလည်း အထူး အလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေနဲ့လည်း ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြင်ဆင် ပြဋ0x081ဌာန်းပေးကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို အစဉ်အမြဲ ဒွန်တွဲပြီး အဘက်ဘက်မှ လေ့လာသုံးသပ် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိပါးခြင်း မရှိခဲ့သော အစဉ်အဆက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအစဉ်အလာကို ဆက်ခံကျင့်သုံးလျက် ရှိသော ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ ကမာ0x081ဘ့နိုင်ငံအားလုံးနှင့် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံလျက် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း တာဝန်ကျေပွန်သော ကမ0x081ဘာ့မိသားစုဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ထည်ထည်ဝါဝါ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက0x081ကဋ0x081ဌတာဝန်ကို ရယူထမ်းဆောင်ဖို့ တရားဝင် အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံ အပါအဝင် ကမ0x081ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဒီကနေ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့လူဘောင်ကို ချောမွေ့ညင်သာစွာ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကမ0x081ဘာ့မျက်မှောက် အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းမှုဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကူးပြောင်းမှု တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထင်အရှား တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအပေါ် တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ စည်းလုံးညီညွှတ်တဲ့ ပဉ0x081စမ မဏ0x081ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းကြောင်းမှာ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ၊ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကြားမှာ၊ သဘာဝ ဘေးအန0x081တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ညီညွတ်မှုအားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျော်လွှား အောင်မြင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီအချိန် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက တစ်ခဲနက် ထောက်ခံအတည်ပြု ပေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရှိပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အစိုးရ ရှိနေပါတယ်။ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရေး မဏ0x081ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော် အရပ်ရပ် ရှိနေပါပြီ။ သီးခြားတည်ရှိနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ0x081ဍိုင် ရှိနေပါပြီ။ စတုတ0x081ထမဏ0x081ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ မီဒီယာတွေ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေ ယုံကြည်လာအောင်၊ မမြင်ကြသေးတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်တွေ့လာအောင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဥပဒေနဲ့အညီ ပေးအပ်နိုင်အောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဟာ လသားအရွယ် အစိုးရတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသက်တမ်း နုနယ်သေးပေးမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ0x081ဍ အသီးသီးမှာ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အသွေးကို အစိုးရသက်တမ်း တစ်ခုလုံးနဲ့မှသာ တိုင်းတာ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကို ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှင်းထားတဲ့ တာဝန်၊ ကျေပွန်ရမယ့် ဝတ0x081တရားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ထမ်းဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြီးလေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ယုံကြည်လေးနက်စွာ ကျွန်တော်တို့ ပခုံးထက်မှာ တင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အသက်ဝင်အောင် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ဒုတိယ သမ0x081မတ (၂) ဦးက အစပြုလို့ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သော ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ရပ်လုံး အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ထိထိရောက်ရောက် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေ ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် နိုင်အောင်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။(၂၂ - ၈ - ၂၀၁၁)
8/23/2011 11:05:00 AM